Chindwin Journal - What is myanmar
Home What is myanmar 6Hot myanmar Model...Read more... mp...Read more... Myanmarmodels ...Read more... NEW FACE MODEL mAY lAY...Read more...	advertisement	What is myanmar	Written by Administrator	Monday, 05 December 2011	The Woman with Two Vaginas! လူတသန်းမှာ တယောက်လောက်သာ မွေးဖွား နိုင်တဲ့ အချေအနေပါ-မိမိ မှာ မွေဖွားစဥိထဲက မိန်မကိုယ်(၂)ခုပါရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ဇယ်ဂျုံးက ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုကြည့်လိုပါက ဒီနေရာ ကလစ်လုပ်ပါရန်! 3:30 Add to The Woman with Two Vaginas! A WOMAN told yesterday howaone-in-a-million medical condition led to her being born with TWO fully-formed vaginas. Hazel Jones, 27, said it mean... GCCMelbourne 1,593,218 views Khingkhing Su and2other friends sharedalink.မြောက်ဥက္ကလာ လူထုသို့ ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောကြားသော မိန့် ခွန်း soundcloud.comဒီမိုကရေစီဟာ နှစ်၂၀လောက်ပေးပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကအစ ဒီမိုကရေစီကို မသွားရင် မရတော့ဘူးလို့ သဘောက်ပေါက်လာရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်လ...Share Min Ko shared The Voice Weekly's video: " တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးသို့ …" - ကိုမင်းကိုနိုင်." တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးသို့ …" - ကိုမင်းကိုနိုင် ‎(၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် သူ၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် လူထုသို့ ပထမဆုံး ပြောကြားခဲ့သော စကားမှကောက်နုတ်ချက် - ရုပ်/သံ)Length: ‎1:10LikeUnlike · · Share · 8 hours ago · Ko Thaung and3other friends sharedalink.Min Ko Naing's speech in Paungde.mp4 www.youtube.comပေါင်းတည်မြို့ ကတစ်ယောက်ရိုက်ထားတာပါ.. ဖေ့ဘုခ်မှတွေ့လို့ ဒေါင်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာShare Ko Thaung သရက်မြို့ခံ အဘွားအိုတဦးမှ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဆိုက်ကားနဲ့ အမှီလိုက်ကာ လှိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီး၊ လက်ဆောင်ထုတ်ကလေး ပေးတဲ့ မျက်ရည်ဝဲဖွယ် မြင်ကွင်းလေးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ...။LikeUnlike · · Share ·2hours ago · Ko Thaung and2other friends sharedalink.20120114 Ko HtayKwyal arrives Yangon Airport from Sittway Prison www.youtube.comမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ ခေတ်ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ကို ပြောင်းနိုင်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံ ကဏ္ဍပေါင်းစုံက ပူးပေါင်း ကြိုးစာ...Share Khingkhing Su shared The Voice Weekly's photo.Wall Photos ပြည်သူလူထုကို စည်းကမ်းရှိဖို့ ပြောဆိုရင်း နှုတ်ဆက်နေတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာပရောက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို တွေ့ရစဉ်။By: The Voice WeeklyLikeUnlike · · Share ·3hours ago · Cho Tu Zal အမေရဲ့ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေ. . .Zaw Win's Photos အမေ နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရင်ထဲငြိလာသော ဓါတ်ပုံများBy: Zaw Win Cho Tu Zal and Ko Thaung shared Demo Waiyen's photo.Wall Photos ကိုမင်းကိုနိုင် မိဘများနဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီ...By: Demo WaiyenShare Cho Tu Zal လက်ပံတန်းမှာလည်း မပြတ်တမ်းပါပဲ...Zaw Win's Photos Yangon Media Group လက်ပံတန်းမြို့နယ်တွင် ပြည်သူများအား ဟောပြောစဉ်-(ပုံ-၃)။ရင်ထဲငြိလာသော ဓါတ်ပုံများBy: Zaw Win Ko Thaung and Min Ko sharedalink.20120114 Sithu Maung arrives Yangon Airport from Butheetaung Prison.flv www.youtube.comဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စည်သူမောင်ဟာ ဘူးသီးတောင်ထောင်ကနေ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ စည်သူမောင်ဟာ ရွှေဝါရောင်ဆန္ဒပြပွဲ အတွင်း ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့မှုေ...Share Writeacomment...Cho Tu Zal and Myat Lay Ngon shared Messenger News Journal's photo.Wall Photos ကိုမင်းကိုနိုင်အား ယနေ့ည၈း၀၀ မြာက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဈ)ရပ်ကွက် ဘုမ္မာ(၅) လမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ခံလူထုနှင့် စကားပြောနေစဉ်တွေ့ရပုံBy: Messenger News Journal6people like this.Nay Min Khant ကိုမင်းကိုနိုင်ရေ လွတ်တော်ထဲအရောက်သွားပါ .. အမေစု နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ တွေ လွတ်တော်မှာရှိရင် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာပါပြီ။7 hours ago · LikeUnlike · 2Writeacomment...Ko Thaung မျက်ရည်နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ ဖ ဘ မျက်ရည်နဲ့ ရိုက်ထားလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ.... စာလုံးတွေဟာ ဝါးနေတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ သတင်းတွေက မမှုန်ဝါးတော့ဘူး။ မျက်မှန်ကို... ခဏခဏ သုပ်ပြီးမှ ကြည့်နေရတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ သတင်းတွေက သုပ်ပစ်လို့မရအောင် ထင်ထင်လင်းလင်း ဖြစ်လာနေပြီ။ အမေ ဆုံးတယ် မျက်ရည် မကျခဲ့ဘူး။ အဖေ ဆုံးတယ် မျက်ရည် မကျခဲ့ဘူး။ အခု ထောင်ဗူးဝက သူတို့ လမ်းလျှောက်ပြီး ထွက်လာကြတယ် ဘာ့ကြောင့်များ မျက်ရည်ကျလောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါလိမ့်။ မျက်ရည်နဲ့ ဆလိုက်ထိုးတယ် မျက်ရည်နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တယ် ကင်မရာခလုပ်ပေါ်မှာ နှလုံးသားနဲ့ပဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖိနေမိပေါ့။ ငြိမ်းဝေ ၁၃၊ ၁၊ ၂၀၁၂ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်See MoreLikeUnlike · · Share ·2hours ago · Writeacomment...Cho Tu Zal ပြည်သူကို လက်အုပ်ချီ ဦးညွှတ်တာ ခွပ်ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်ပါ. . .Zaw Win's Photos Yangon Media GroupKo Thaung The Voice Weekly မှောင်မိုက်သော ညအချိန် ခွပ်ဒေါင်းအလံများလွှင့်ထူပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်ကို မြောက်မြားစွာသော ပြည်သူများက အားရဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။LikeUnlike · · Share ·2hours ago · မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်းပါသော၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာပြည်ပြည်သူအပေါင်း နှစ်တောင်း အားရ၀မ်းးသာ ပျော်ရွှင်နေကြပါပြီ Myape Rit well doneAmnesty for 651 prisoners State TV announces ဒီနေရာကို ကလစ်လုပ်ပါရန် www.youtube.com‎"အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ ၆၅၁ဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ၄၀၁ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်း" ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတသ...LikeUnlike · · Share · Thwemarlar Thwe ကျေးဇူး...။ကျေးဇူး.........................Wall Photos ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒများကို လက်တွေ့ကျကျ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ၏ လုပ်ရပ်များအား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ သမ္မတကြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ပြည်သူ့အကျိုးကို ထမ်းရွက်လို့ ပြည်သူချစ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျား))By: သက်တန့်ချိုLike · · Share ·2hours ago · Cho Tu Zal ‎(၁၃၊၁၊၂၀၁၂) လက်ခုပ်သံတညံညံ အောင်သပြေပန်းရယ်. . . နဲ့ အိမ်ပြန်လမ်း ... ပြည်သူ မှန်းလို့မျှော်... တို့ရဲဘော်တွေ. . ကြီးလေ လှလေ. . .လှနိုင်ပေတဲ့ . . . “ဒေါင်း” သူရဲကောင်း။ ။ ချိုတူးဇော်See MoreLikeUnlike · · Share ·2hours ago · Myape Rit ထာဝရ ငြိမ်ချမ်းရေး ရ နိုင်ပါစေလို့KNU and govt; representatives meet on 11 1 2012 ဒီနေရာမှာ ကလစ်လုပ်ပါရန် www.youtube.comLikeUnlike · · Share · 18 seconds ago Yaung Ni Oo likes Eleven Media Group's photo.Wall Photos Like · · 1921861 ·7minutes ago · Phyu Youn shared Eleven Media Group's photo.Wall Photos သရက်အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော ကိုမင်းကိုနိုင်By: Eleven Media Group Phyu Youn shared 7Day News Journal's photo.Wall Photos ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့စဉ် ။ ဦးခွန်ထွန်းဦးသည် နိုင...See MoreBy: ‎7Day News Journal Phyu Youn shared The Voice Weekly's photo.Jan 13, 2011 #1 အစိုးရသစ်၏ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လွတ်မြောက်လာသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ဇနီးသည်နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်အစိုးရသစ်၏ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လွတ်မြောက်လာသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်By: The Voice Weekly Phyu Youn shared 7Day News Journal's photo.Wall Photos ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်လာသော ကိုဌေးကြွယ်ကို တွေ့ရစဉ်By: ‎7Day News Journal Myape Rit sharedalink.Kyaw Ko Ko Interview soundcloud.comတောင်ကြီးထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ အင်တာဗျုး (DVB)Like · · Share · aboutaminute agoMyape Rit via BBC Burmese ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့် လွတ်မြောက် www.bbc.co.ukနိုင်ငံတ၀ှန်းမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရာနဲ့ချီ လွတ်မြောက်Like · · Share · 34 minutes agoMyape Rit လှိုက်လှဲ ၀မ်းသာစွာကြိုဆိုပါတယ်-MIN KO NAING IN THEAT SPEECH soundcloud.comသရက်အကျဉ်းထောင်မှ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီအချိန်မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် သရက်မြို့ခံ ပြည်သူလူထုအား န...Like · · Share · Myape Rit sharedalink.SI THU ZAY YA INTERVIEWS soundcloud.comဟင်္သာတထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံသတင်းထောက် ကိုစည်သူဇေယျနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်Like · · Share · 12 seconds ago Myape Rit sharedalink.ZAW THAT HTWE WIFE-INTERVIEWS soundcloud.comတောင်ကြီးထောင်က ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာတဲ့ အားကစာသတင်းအယ်ဒီတာကိုဇော်သက်ထွေး ကို ဒီဗွီဘီသတင်းထောက်ကိုထွေးက မေးမြန်းထားပါတယ်၊(DVB)LikeThe Voice Weekly မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွတ်မြောက်လာသော အရှင် ဂမ္ဘီရသည် သိက္ခာထပ် မင်္ဂလာကို မြောင်းမြတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မိခင်ရှိရာ မိတ္ထီလာသို့ ယနေ့ညနေတွင် ပြန်လည် ကြွရောက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။Like · · Share · 39 seconds ago Myape Rit via DVB TV News NAY PHONE LATT INTERVIEWS soundcloud.comဖားအံထောင်မှ ဒီကနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ဘလော့ခ်ဂါနေဘုန်းလတ်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်(DVB)Like · · Share · aboutaminute ago DVB TV News သာယာဝတီထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်းနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်NilarThein သာယာဝတီထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်းနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်Like · · 11110 ·2hours ago via SoundCloud နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စတင်လွတ်မြောက်၈ဂ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုဂျင်မီ၊ မနီလာသိန်း အပါအ၀င် တခြားသော ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်အရ ယနေ့ လွတ်မြောက်လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တခုတွင် တွေ့ရသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ (ဓာတ်ပုံ - AP) သရက်ထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်အား လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံ ထောင်အာဏာ ပိုင်များက ယနေ့နံနက် ၇ နာရီ ၁၅မိနစ်က အကြောင်းကြားသည့်အတွက် သွားရောက်ကြိုဆိုနေပြီဟု အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ “ညီမတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သွားကြိုနေကြပြီ။ မနက် ၈နာရီခွဲမှာ လွတ်မယ်။ ဒီတခါတော့ တကယ်လွတ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ထောင်မှ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးအပါအ၀င် ၁၄ ဦး ယနေ့လွတ်မြောက် လာကြောင်း မိုင်းဆတ်ထောင်ပိုင်ကြီးမှ ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးထောင်အကျဉ်းထောင်၌ အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ကိုဌေးကြွယ်အပါအဝင် တခြားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀ ဦး နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ အပါဝင် ၃၁ ဦးအား ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ရေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယောက်ဖတော်စပ်သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးထောင်တွင် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ကိုမင်းဇေယျာသည်လည်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြောင်း၊ ယနေ့နံနက် ၁၂ နာရီခန့်တွင် ကားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ မချိုချိုဝင်းက ပြောသည်။ “ကိုဇေယျနဲ့ ဖုံးပြောလိုက်ရတယ်၊ ပျော်တယ်ဆိုတာထက် စိတ်ချမ်းသာတာပါ” ဟု မချိုချိုဝင်းက ဆိုသည်။ လာရှိုးထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပါအ၀င် ၁၀ ဦးလွတ်မြောက်ကြောင်း သိရသည်။ တခြားသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရ သည့် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်သံဃာတပါးဖြစ်သည့် အရှင်ဂမ္ဘီရ၊ တောင်ငူထောင်မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်း ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဇော်ဇော်မင်းနှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီး ၀င်းမြင့် အပါအ၀င် ၂၄ ဦး လွတ်မြာက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သာယာဝတီထောင်မှ မနီလာသိန်းနှင့် မကြည်ကြည်ဝါတို့လည်း လွတ်မြောက်လာသည်။ မနီလာသိန်းက “အပြည့်အ၀တော့ မပျော်နိုင်သေးဘူး။ ရဲဘော်တွေလည်း ကျန်တဲ့သူကျန်သေးတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ထို့အပြင် မိသားစုနှင့် တွေ့ရမည်ကို ၀မ်းသာကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အားဖြည်ရန် စဉ်းစားထားကြောင်း မနီလာသိန်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ သရက်ထောင်မှ ထောက်လှမ်းရေးများလည်း လွတ်မြောက်လာရာ ဗိုလ်မှူးကြီး စန်းပွင့်လည်း ပါဝင်ကြောင်း စုစုပေါင်း ၂၇ ဦး လွတ်မြာက်လာကြောင်း သတင်းရသည်။ အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့် ရစေရန်ဟုဆိုကာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရက အကျဉ်းသူ အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးကို ပုဒ်မ ၄၀၁၊ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုဂျင်မီ၊ မနီလာသိန်း အပါအ၀င် တခြားသော ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်အရ ယနေ့ လွတ်မြောက်လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တခုတွင် တွေ့ရသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ (ဓာတ်ပုံ - AP) သရက်ထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်အား လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံ ထောင်အာဏာ ပိုင်များက ယနေ့နံနက် ၇ နာရီ ၁၅မိနစ်က အကြောင်းကြားသည့်အတွက် သွားရောက်ကြိုဆိုနေပြီဟု အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ “ညီမတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သွားကြိုနေကြပြီ။ မနက် ၈နာရီခွဲမှာ လွတ်မယ်။ ဒီတခါတော့ တကယ်လွတ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ထောင်မှ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးအပါအ၀င် ၁၄ ဦး ယနေ့လွတ်မြောက် လာကြောင်း မိုင်းဆတ်ထောင်ပိုင်ကြီးမှ ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးထောင်အကျဉ်းထောင်၌ အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ကိုဌေးကြွယ်အပါအဝင် တခြားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀ ဦး နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ အပါဝင် ၃၁ ဦးအား ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ရေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယောက်ဖတော်စပ်သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးထောင်တွင် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ကိုမင်းဇေယျာသည်လည်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြောင်း၊ ယနေ့နံနက် ၁၂ နာရီခန့်တွင် ကားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ မချိုချိုဝင်းက ပြောသည်။ “ကိုဇေယျနဲ့ ဖုံးပြောလိုက်ရတယ်၊ ပျော်တယ်ဆိုတာထက် စိတ်ချမ်းသာတာပါ” ဟု မချိုချိုဝင်းက ဆိုသည်။ လာရှိုးထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပါအ၀င် ၁၀ ဦးလွတ်မြောက်ကြောင်း သိရသည်။ တခြားသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရ သည့် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်သံဃာတပါးဖြစ်သည့် အရှင်ဂမ္ဘီရ၊ တောင်ငူထောင်မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်း ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဇော်ဇော်မင်းနှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီး ၀င်းမြင့် အပါအ၀င် ၂၄ ဦး လွတ်မြာက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သာယာဝတီထောင်မှ မနီလာသိန်းနှင့် မကြည်ကြည်ဝါတို့လည်း လွတ်မြောက်လာသည်။ မနီလာသိန်းက “အပြည့်အ၀တော့ မပျော်နိုင်သေးဘူး။ ရဲဘော်တွေလည်း ကျန်တဲ့သူကျန်သေးတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ထို့အပြင် မိသားစုနှင့် တွေ့ရမည်ကို ၀မ်းသာကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အားဖြည်ရန် စဉ်းစားထားကြောင်း မနီလာသိန်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ သရက်ထောင်မှ ထောက်လှမ်းရေးများလည်း လွတ်မြောက်လာရာ ဗိုလ်မှူးကြီး စန်းပွင့်လည်း ပါဝင်ကြောင်း စုစုပေါင်း ၂၇ ဦး လွတ်မြာက်လာကြောင်း သတင်းရသည်။ အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့် ရစေရန်ဟုဆိုကာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရက အကျဉ်းသူ အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးကို ပုဒ်မ ၄၀၁၊ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ တောင်ဒဂုံ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူဖမ်းဆီးခံရBy မအေးအေးမာဒီကနေ့ ရန်ကုန်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့သူ အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် NLD ပါတီဝင် ဦးစိုးကြွယ်ကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးစိုးကြွယ်ဟာ လူအခွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိုရည်ရွယ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ ဒီကနေ့မှာ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် သူ့ကို ဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားသလဲ၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသိရအောင်လို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ပြထားပါတယ်။တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ လူအခွင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ NLD ပါတီဝင် ဦးစိုးကြွယ်ဟာ မနက် ၉ နာရီကျော်မှာပဲ အဖမ်းဆီးခံရကြောင်း မိသားစုဝင်တဦးက ပြောပြပါတယ်။“ခေါင်းစဉ်ကတော့ မိမိအခွင့်အရေးကို မိမိတောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ ပါတီအမည် သုံးပြီး လမ်းသူလမ်းသားများထံမှ ငွေကြေးကောက်ခံထားခြင်းကို အရေးယူပေးပါ၊ နံပါတ် (၁) က၊ နံပါတ် (၂) က အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများအား တိုင်ကြားထားခြင်းကို အရေးယူပေးပါ။ နံပါတ် (၃) က ရပ်ကွက်အတွင်း ကျန်ရှိနေသည့်လမ်းများအား တပြေးညီ ကွန်ကရစ်ခင်းပေးပါ။ နံပါတ် (၄) အချက်က မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်လမ်းပြေးဆွဲနေသည့် အဓိက မိန်းလမ်းမကြီးများအား ပြုပြင်ပေးပါ။ နံပါတ် (၅) က လျှပ်စစ်မီတာခ၊ မီတာထိန်းသိမ်းခနှင့် မီတာခများပြင်ဆင်ပြီး ၂၄ နာရီ မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ နံပါတ် (၆) က မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမီတာသုံးစွဲသူများ ရေအပြည့်အဝရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ရည်ရွယ်ချက်-လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် - တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတာပေါ့။ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး ဒီတိုင်း လျှောက်သွားတာပေါ့။ ကားမှတ်တိုင် ၂ မှတ်တိုင်လောက် လျှောက်ပြီးတော့ ခေါ်တင်သွားရော” ဆန္ဒပြပြီးတဲ့နောက် သူနောက်ကနေ လူအင်အား ၅၀ လောက်က လိုက်ပါတောင်းဆိုဖို့ လူစုဝေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ရဲတွေ က သူကိုခေါ်သွာပြီးနောက် တောင်ဒဂုံရဲစခန်းမှာ ထားကြောင်း မိသားစုက အာမခံပေးဖို့ တောင်းဆိုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း ပြောပြပါတယ်။“အခုချိန်က စခန်းမှာ၊ စခန်းကတော့ စခန်းမှူး၊ မြို့နယ်မှူးကတော့ အာမခံရမယ်လို့တော့ ပြောလိုက် တယ်။ လောလောဆယ် အာမခံလုပ်ဖို့သွားတဲ့အခါကျတော့ သူတို့အကြောင်းကြားပါ့မယ်တဲ့။ ခဏ ပြန်လိုက်ပါအုံးတဲ့။ ပြန်ပြီးတော့ နားပြီးတော့မှ ကျနော်တို့အကြောင်းကြားမယ်ပေါ့လေ၊ အာမခံ အတွက်။ မေးတော့ မေးသွားတယ်။ သေချာ မသေချာတော့ မသိသေးဘူး။ အခုကတော့ မြို့နယ်မှူးနဲ့ စခန်းမှူးနဲ့ကတော့ သဘောချိုပါတယ်။ အာမခံပေးမယ် ပြောထားတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ဒါ မိသားစု စဘော်လေးတွေ၊ ဘာတွေ၊ ညာတွေနဲ့ အာမခံဖို့ တင်ထားပြီးသွားပြီ။” တောင်ဒဂုံက လမ်းတွေဟာအရင် ၂၀၁၀ ရွေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက စည်းရုံးရေး ဆင်းပြီး လမ်းတွေခင်းပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သလို လမ်းကြေးကောက်ခံပြီး စံနစ်တကျ ခင်းပေးတာတွေလည်းမရှိတာမျိုး တွေရှိတယ်လို့ ရပ်ကွက်လူထုက ပြောပါတယ်။ဦးစိုးကြွယ်ဟာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ထဲက လူထုခံစားနေရတာတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အတွက် ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သူတောင်းဆိုချက်တွေဟာ သူတိုမြို့နယ်တွင်းက ပြည်သူတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေသာဖြစ်ကြောင်း သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေက ဆိုပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း ဦးအောင်မြင့်ဟာ ဘိုကလေးမြို့မှာ သံခြေကျင်းခတ်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့သလို တွံတေးမြို့မှာလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးအောင်ဖေဟာ ထောင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုတော့ ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေ မရှိပေမယ့် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်တာတွေကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာပဲ အရင်တုန်းကလို စောင့်ကြည့်သတင်းယူတာအပြင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေကို လုပ်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရှားပါးဓါတ်ပုံများ ရွေတိဂုံရင်ပြင်မြောက်ဘက်မုဒ်အား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံရင်ပြင်ရှိစဥ့်ကူမင်းခေါင်းလောင်းတော်အား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်အပြီး စစ်အတွင်းက မဟာမိတ်တို့ အသုံးပြုခဲ့သော စမစ်ဖိုင်းယား စစ်လေယာဉ်များအား အများပြည်သူကြည့်ရှု့နိူင်ရန် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမ အနီးတွင် ပြသထားစဉ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်အပြီး ရွေတိဂုံရင်ပြင်တော်တွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အင်္ဂလိပ်စစ်သည်များ။ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်အပြီး ရွေတိဂုံရင်ပြင်တော်တွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အင်္ဂလိပ်စစ်သည်များ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက မန္တလေးမြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားနေသော မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက မန္တလေးမြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားနေသော မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားသော မန္တလေးနန်းတွင်းရှိ ဂျာမနီလူမျိုး ခရစ်ယန်သာသနာပြုဆရာမတ်ကြီး၏ (SPG Mission)ကျောင်းနှင့် ကျောင်းတတ်နေသော မင်းညီ၊မင်းသားများအား (၁၈၆၈)ကရိုက်ကူးထားပုံ။ ဆရာမတ်ကြီး၏ကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေသောမင်းညီမင်သားများအား စောင့်နေကြသော အချွေအရန်များနှင့်စာသင်ကျောင်းအား(၁၈၆၈)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ဆရာမတ်ကြီး၏ကျောင်းနှင် ကျောင်းရှေ့တွင် အမှတ်တရဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေသော မင်းညီမင်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏အချွေအရန်များအား(၁၈၆၈)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကဖူးတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံရင်ပြင်ရှိဆောင်းတန်းများအား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံရင်ပြင်ရှိဆံတော်တွင်းစေတီအား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံရင်ပြင်ရှိစဥ့်ကူမင်းခေါင်းလောင်းတော်အား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံတောင်ဘက်မုဒ်သို့သွားရာလမ်းအား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။ ရွေတိဂုံတောင်ဘက်မုဒ်အဝင်ဆောင်းတန်းအား(၁၈၉၀)ခုနှစ်ကတွေ့ရပုံ။mmdailynews ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခါနီး ရန်ကုန်မြို့ကို မဟာမိတ်စစ်တပ်များ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်အပြီး ရန်ကုန်မြို့အတွင်း စစ်ရေးပြချီတက်နေကြစဉ်။ Facebook မှာ ဖော်ပြနေကြတဲ့ ပုံတပုံမည်သူရဲ့လက်ရာမည်သည့်ဒေသ မသိရဧရာဝတီမှကူယူဖေါ်ပြပါသည်။ မြဖေ Brazilian councillor proposes law demanding brides wear underwear when they marry Wednesday, January 11, 2012 မင်္ဂလာအခမ်းအနားအထိတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်လာကြပေးပါ.... လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲမည့် ပွဲသို့ တက်ရောက်မည့် သတို့ သမီးများအား အတွင်းခံဘောင်းဘီ၊ အောက်ခံ ဘောင်းဘီများမ၀တ်မနေရ ပြဌာန်းပေးမည့် ဥပဒေတစ်ခုအား ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးက အ ကြံပြုတင်ပြခဲ့ ပါတယ်.... ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ အရှေ့ တောင်ပိုင်းဒေသ ဗီလာဗယ်လ်ဟာ မြို့ မှအမျိူးသမီးများဟာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားဝတ် ပြုဆုတောင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်ဘုရားကျောင်းသို့ မင်္ဂလာဝတ်စုံဖြင့် လာရောက်ကြရာတွင် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ၊ အောက်ခံဘောင်းဘီ ၀တ်မလာသူများ၏အရေအတွက်က ပိုမိုများပြားလာပါတယ်လို့ အဆိုပါ အမတ်မင်း အိုဇီယက်စ်ဇီဇီ ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ ပါတယ်.... ယခုကဲ့ သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်းထိုကဲ့ သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ ၏အိမ်ထောင်ရေး ပိုမိုခိုင်မြဲစေသည်ဟူသော အယူသီးမှုအား သတို့ သမီးများကစွဲလမ်းယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်... ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ရီပါတ်ဗလီကင်ပါတီဝင် အဆိုပါနိုင်ငံရေးဂုရုကသတို့ သမီးဝတ်စုံများ၏လည်ဟိုက်မှုအတိုင်း အတာကိုလည်းကန့် သတ်တားမြစ်ချက်ပါဝင်မည့်၎င်းတင်ပြသည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာ ပွဲဆိုင်ရာဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုပြုလုပ်မည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးများအနေဖြင့် သတို့ သမီးများ၏ မဖွယ်မရာ လှစ်ဟပြမှုများကြောင့် အရှက်ရစေခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်လိမ့် မည်ဖြစ်ပါတယ်.... ယခုကဲ့သို့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် အောက်ခံဘောင်းဘီမ၀တ်ပဲ ကျင်းပပါက အိမ်ထောင်ရေးရေရှည်တည် တံ့ ခိုင်မြဲလိမ့် မည်ဟု အမျိူးသမီးအများအပြားက ယုံကြည်ကြပါတယ်... ဒီအချိန်လေးအထိတော့ စိတ်ရှည်ပေးကြပါကွယ်... ဆုတောင်းပြီးတော့ မှ သဘောရှိကြပါနော်... " တစ်ကယ်တော့ မည်သူမဆို မိမိနှစ်သက်သလို၊ ဆန္ဒရှိသလိုလက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ကြပါ တယ်...သို့ သော်လည်း ဘာသာရေးအရ မြင့် မြတ်သည့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာသို့ လာရောက်လာတွင်တော့ရိုသေလေးစားမှုပြကြရမှာပါ.... အတွင်းခံဘောင်းဘီမပါပဲနဲ့ တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး..." လို့ အဆိုပါအမတ် မင်းက ဆိုပါတယ်.... သို့ သော်လည်း ထိုကဲ့ သို့ ဝတ်မ၀တ်ကို ကြည့် ရှုစစ်ဆေးရန်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ အဆိုပါဥပဒေအားလိုက် နာစေရန်အတွက် ပြဌာန်းဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ကြောင်း သူက ၀န်ခံပြောကြားခဲ့ ပေမယ့် ဘာသာရေးအရမြင့် မြတ် သည့် နေရာများအား ထိမ်းသိမ်းရန်အတွက် ပညာပေးလှုံ့ ဆော်မှုများပြုလုပ်သင့် တယ်လို့ အကြံပေးပြော ကြားခဲ့ ပါတယ်... ထိုမြို့ တွင် လက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်ပေးနေသည့် သင်းအုပ်ဆရာက တော့ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းအား အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်... " အတွင်းခံဝတ်ဖို့ မ၀တ်ဖို့ ကိစ္စက အမျိူးသမီးတွေ သူတို့ ဘာသာဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်... အဲဒါက တစ်ခြားဘာနဲ့ မှမပါတ်သက်ပါဘူး... အခုလိုမျိူးအတင်းအကြပ်စေခိုင်းဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုယင် ၊ ထိုကဲ့သို့ လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးမယ်ဆိုယင်တော့ အတော့် ကို အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ် မှာပါ..." လို့ သင်းအုပ်ဆရာ အီနို့ ခ်ျဒီကက်စထရို က အဆိုပါဥပဒေအား လှောင်ပြောင်ရှုံ့ ချပြောကြားခဲ့ ပါ တယ်... သြော်.... ကြံကြံဖန်ဖန်လည်း အယူသီးကာယုံကြည်တတ်ကြပါပေတယ်.... ဆုတောင်းပေးတဲ့ သင်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကိုတော့ ဒုက္ခမပေးသင့် ပါဘူး.... A Brazilian councillor has proposedalaw to force brides to wear knickers at the altar. Ozias Zizi claims thatagrowing number of women in his south-eastern town of Vila Velha are turning up to church with nothing on underneath their wedding dresses. The superstitious brides believe it will make their marriages last longer, he explained. The Brazilian Repulican Party (PRB) politician claims his new law, which would also putalower limit on brides’ necklines, will save ministers of religion from embarrassment as they conduct weddings in the town.nHe said: 'There arealot of women who believe that if they get married without wearing knickers this helps secure their nuptials for longer. 'The person, in fact, can get married in whichever way they like, but the moment they enteraplace of worship they must show some respect. And without knickers just won’t do.' The councillor admitted that the law would be hard to enforce – ‘we couldn’t do any checks’ – but suggested that an educational campaign could ‘preserve our sacred places’. A local pastor who takes weddings in the town branded the bill as 'ridiculous'.Deriding the bill, Enoch de Castro said: 'There are women who makeachoice to not use underwear. This has nothing to do with anything. It would be an absurd thing to try to have to police something like this, to find out whetherabride is wearing knickers or not.' Posted by peter kyaw | at 10:06 AM | Labels: news: dailymail.co.uk အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခဲ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ဦးဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း လိုက်ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဌ တာဝန်ယူပြီး အရင်ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ထဲက ခြောက်ဦးက ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ အဖြစ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၆ ဦးကတော့ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးဟန်သာမြင့်၊ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း ထပ်မံ ဖြည့်စွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင် အပါအဝင် အသက် ၈၀ ကျော်သူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေကတော့ သဘာပတိအဖွဲ့အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာပတိအဖွဲ့ရဲ့ နာယက ကဦးတင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပါတီဝင်သစ်တွေကို စတင်လက်ခံခဲ့သလို ပါတီကိုလည်း ဆိုင်းဘုတ်ပြန်တင်ပြီးအလံတင် အခန်းအနားလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ပြီး ပါတီကိုလည်း မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာကျမှ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ Myape Rit စိတ်မကေါင်းစရာပါ-သင်္ခဏ်စာ ယူစ ရာပါ-Zalun GTC Student Rape Case (6-1-2012) ဗီဒီယိုကြည့်ရန်ဒီနေရာ ကလစ်လုပ်ပါရန် www.youtube.comLikeUnlike · · Share ·5minutes ago Mon La အချန်မှီသတိမပေး ရှားနိုင်တဲ့ မြန့်မာ့ လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီး ဤသမတနိုင်ငံသစ်ကြီးကိုတည်ဆေက်ရာ၌ ခေါင်ဆောင်တွေ သစ္စာဖေါက်လျင် ခြေလှမ်မှားလျင် ယနေ့စိုက်ထူတဲ့ ဤလွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးသည် သစ္စာဖေါက်နေသော ခေါင်ဆောင်များ ကို၎င်း ခြေလှမ်း မှားနေသော ခေါင်ဆောင်များကို၎င်း အချိန်မှီ သတိပေး နိင်သည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးမှာ လွန်ခဲသော ၆၄ နှစ် (ဒီနေ့)မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ စာတပိုက်ပါ အချန်မှီသတိမပေး ရှားနိုင်တဲ့ မြန့်မာ့ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီး ဤသမတနိုင်ငံသစ်ကြီးကိုတည်ဆေက်ရာ၌ ခေါင်ဆောင်တွေ သစ္စာဖေါက်လျင် ခြေလှမ်မှားလျင် ယနေ့စိုက်ထူတဲ့ ဤလွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးသည် သစ္စာဖေါက်နေသော ခေါင်ဆောင်များ ကို၎င်း ခြေလှမ်း မှားနေသော ခေါင်ဆောင်များကို၎င်း အချိန်မှီ သတိပေး နိင်သည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးမှာ လွန်ခဲသော ၆၄ နှစ် (ဒီနေ့)မှာ ရေးထိုးခဲ့တဲ့ စာတပိုက်ပါLikeUnlike · · Share · Myape Rit့့ဤသမတနိုင်ငံသစ်ကြီးကိုတည်ဆေက်ရာ၌ ခေါင်ဆောင်တွေ သစ္စာဖေါက်လျင် ခြေလှမ်မှားလျင် ယနေ့စိုက်ထူတဲ့ ဤလွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးသည် သစ္စာဖေါက်နေသော ခေါင်ဆောင်များ ကို၎င်း ခြေလှမ်း မှားနေသော ခေါင်ဆောင်များကို၎င်း အချိန်မှီ သတိပေး နင်သည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။aboutaminute ago · LikeMyape Rit့့ဤသမတနိုင်ငံသစ်ကြီးကိုတည်ဆေက်ရာ၌ ခေါင်ဆောင်တွေ သစ္စာဖေါက်လျင် ခြေလှမ်မှားလျင် ယနေ့စိုက်ထူတဲ့ ဤလွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးသည် သစ္စာဖေါက်နေသော ခေါင်ဆောင်များ ကို၎င်း ခြေလှမ်း မှားနေသော ခေါင်ဆောင်များကို၎င်း အချိန်မှီ သတိပေး နင်သည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။9 minutes ago · Like Myape Rit့့ဤသမတနိုင်ငံသစ်ကြီးကိုတည်ဆေက်ရာ၌ ခေါင်ဆောင်တွေ သစ္စာဖေါက်လျင် ခြေလှမ်မှားလျင် ယနေ့စိုက်ထူတဲ့ ဤလွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်ကြီးသည် သစ္စာဖေါက်နေသော ခေါင်ဆောင်များ ကို၎င်း ခြေလှမ်း မှားနေသော ခေါင်ဆောင်များကို၎င်း အချိန်မှီ သတိပေး နင်သည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။2 minutes ago · Like PublicMyape Rit via Nweni Myint မီဒီယာတွေ ဟာ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဗန္ဒုလပန်ခြံထဲက လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်က စာသားတွေကို ပြည်သူများ သိရှိဖတ် ရှု နိုင်အောင် ဖေါ်ပြ ပေးကြစေလိုပ်ါတယ်။1948 Burma celebrating day of independence http://www.youtube.com/watch?v=k3y7Rn47aNw&feature=share clipLikeUnlike · · Share · Myape Rit နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးဘူးဆိုရင် NLD ရဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ရှေးဆက် ထောက်ခံ ပေးဖို့ စဉ်စားရပါတော့မယ်ဗျာ- Writeacomment...Maung Thura ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးပြတွေလက်ထဲရောက်နေသလိုပဲလို့ပြောခဲ့မိတာ ရုပ်သိမ်းပါတယ်။ပင်လယ်ဓါးပြတွေက ကတိတည်တယ်ဗျ။ခု လုပ်ရပ်က တော့ ကတိသစ္စာပျက်ယွင်းခြင်းပဲ။ယုံကောင်ငုံလို့ယုံရုပ်ရေးလဲမယုံရေးချမယုံ။LikeUnlike · · Share · about an hour ago near Rangoon · Yaung Ni Oo and 86 others like this.4 shares4 sharesYan Moe Aung HOKE tal thu toke money ya yin ga di tii tal ku harr ka byarr :((about an hour ago · LikeUnlikeSoe Gyi ခု မှ သိတယ်လား..:Pabout an hour ago · LikeUnlike · 2Kyi Kyi Soe ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ.. သွေးမြေမကျဖို့က အဓိက ဆိုပြီး လူမပြောင်းလဲ မူပြောင်းတယ်ဆိုရင် သိတ်မဆိုးသေးပါဘူးလေ.. လို့ဖြေသိမ့်နေမိတာပါ။ ကျမတို့ အမျှော်လင့်ဆုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို ရဲရဲတောက် ထောင်ကျခံ.. ကိုယ်ကျိုးစွန့်.. ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုး ကို ကြံ့ကြံ့ ခံရင်း လုံးဝ လမ်းကြောင်း အလွှဲမခံတဲ့ နိုင်/ကျဉ်းတွေ လွတ်လပ်စွာ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်လာဖို့ပါ။ ခုတော့.............(((( တောက် ))))...about an hour ago · LikeUnlike · 1Myape Rit နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးဘူးဆိုရင် NLD ရဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ရှေးဆက် ထောက်ခံ ပေးဖို့ စဉ်စားရပါတော့မယ်ဗျာ-about an hour ago · LikeUnlikeAye Zaw ၁၉၆၄နောက်ပိုင်း ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်ရင် မျက်နှာဖုံးနဲ့ခေါင်းစဉ်၊လူသာပြောင်းပေမဲ့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ထားကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကသက်သေပြနေပြီဘဲလေ။၏about an hour ago · LikeUnlikeMicky Naing ‎( ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးပြတွေလက်ထဲရောက်နေသလိုပဲလို့ပြောခဲ့မိတာ ရုပ်သိမ်းပါတယ်။)....... မှားတဲ့ အခါလည်း မှားပေအုံးမပေါ့ ဆရာရယ်...........about an hour ago · LikeUnlikeMicky Naing ပင်လယ်ဓါးပြတွေက ကတိတည်တယ်ဗျ။about an hour ago · LikeUnlikeM Zaw Moe What to do? What should we do?55 minutes ago · LikeUnlikeKhinmg Aye မူတွေဘယ်လိုပြောင်ပြောင်လူမှမပြောင်သေးတာ...သတိဆိုတဲ.ဝေါဟာ၇ကိုနားမလည်သူတွေဘာ53 minutes ago · LikeUnlikeYanant Cho ထုံးစံ52 minutes ago · LikeUnlikeMoe Moe Ei သူတို့ ကကြောက်နေကြတုန်းကိုး။အထဲမ51 minutes ago · LikeUnlikeMicky Naing ဘယ်တော့မှ မယုံဘူး၊50 minutes ago · LikeUnlikeKhinmg Aye ဘယ်တော.မှယုံလိုမ၇တာ ...အဲဒါစစ်အစိုး၇38 minutes ago · LikeUnlike · 2Micky Naing ယုံတဲ့သူသာ အရူးဖြစ်မှာ35 minutes ago · LikeUnlike · 3Micky Naing အပြောင်းလဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း လုပ်ယူမယ့်သူတို့၊ ပူးသတ်မယ့်သူတို့၊ တိုးခွေ့မယ့်သူတို့၊ လွှတ်တော်တက်ရင် အိပ်ဆေး၊ မေ့ဆေး၊ ထုံဆေး ဆောင်သွားပါ28 minutes ago · LikeUnlikeArea X Area တနည်းပဲရှိတော့တယ် ဘက်ဂဒက် ဘင်လာဒင် လစ်ဗျား မြန်မာ20 minutes ago · LikeUnlikeKyaw Aye ‎Maung Thura ကိုသူရ...ကစားပွဲကအရှိန်ကောင်းလာပြီ။အလျောအစားဘယ်လောက်များမယ်။ဘယ်သူရှုံးမယ်နိုင်မယ်အဆုံးမှာတွေ့ရမှာပဲ။ပြည်သူငြိုငြင်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကခံရမယ်ဆိုတာကနောက်ဆုံးအဖြေပဲလေ။9 minutes ago · LikeUnlikeWriteacomment... PublicMyape Rit I am very sorry when after seen that video clip.When. Where . Who are they?သိရင်ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ..ဒီအမျိုးသားတွကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ကျွန်မကတော့ ဒီလုပ်ရပ် ဒီမြင်ကွင်းကို မှန်တယ်လို့မထင်ပါရှင်...မိန်းကလေးတွေမှားနေသည့်တိုင်အောင်...ယောင်္ကျားလေးတွေ ၀ိုင်းဖွဲ့မရိုက်သင့်ပါဘူး...ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းတွေပဲ...တော်တော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...ဘ၀ပေးကံမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်.....(YYZM) Length: ‎8:15LikeUnlike · · Share · 16 hours ago Myape Rit ရှုပ်ထွေးပွေလီ နက်နဲးလှ တဲ့ ရန်ကုန်မြိုလယ်တနေရာက မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ပါခင်များ- 08 03 04 170936 ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် ကလစ်လုပ်ပါရန် p.l.s clip လု့လောက ကြီးက လူကေါင်းတွေကို ကြာကြာ လက်မခံချင်တာလား? (သို့) လူဆိုတွေကို ကြာရှည်မထားချင်တာလား? ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင်ဟာ ထင်ပေါ်ကြော်ကြား လူသိများ စိတ်ဝင်စားခဲ့ ကြတာတော့အမှန်ပါ ပဲ ခင်များ-ဘာ ကြောင့်ပါလဲ ? The Voice Weekly added 34 new photos to the album Dr. Nay Win Maung (1962 - 2012).Dr. Nay Win Maung (1962 - 2012) The Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color ...Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ယင်းနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးပါကြောင်း။See MoreLikeUnlike · · Share · 674754 ·9hours ago · LikeCommentUnlikeComment Type any name to tag:Type any nameThe Voice WeeklyThe Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ယင်းနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးပါကြောင်း။LikeUnlike · · Share ·9hours ago3 people like this.3 shares3 sharesAriya Vamsa အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါသည်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ ဆရာ့ အရေးအသားတွေကိုလဲ ဖတ်ရှု့ခွင့် မရတော့ပါ။ ဆရာ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ...........။9 hours ago · LikeUnlikeThiha Soe ဆရာ ကောင်းရာ သုဂတိ ၊ ကောင်းဘုံဘဝသို့ ရောက်ပါစေ။8 hours ago · LikeUnlikeYe Thu ဆရာ ကောင်းရာ သုဂတိ ၊ ကောင်းဘုံဘဝသို့ ရောက်ပါစေ။ It was great loss for 50 millions People in Myanmar..7 hours ago · LikeUnlike · 1Khin Joe Phyu လေးစား၊အားကျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လို့...နှမြောတသလို့မဆုံးပါဘူး...6 hours ago · LikeUnlikeWai Zin ဒါက်တာနေ၀င်းမောင် သေဆုံးမှုဟာ မြန်မာပြည်က ဆေးလောက ချွတ်ခြုံကျနေပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးနေမှာသူဟာ ရင်ပတ်အောင့်လာတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပါတီကို မိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆင်နွဲနိင်ပဲ သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး... ၀ိဒူရိယ ဆေးရုံးကို သွားရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီဆေးရုံက ကိုးမိုင်တရုပ်သငြိုင်းကို စစ်တပ်ကသိမ်းပြီး စီးပွားရေးသမား တဦးကို ( ပိုင်ရှင်က ဆိုနီဝေလွင်လို့ လဲသိရ) ရောင်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဆေးရုံးမှာဆရာဝန်တွေမရှိပဲ နစ်သစ်ကူးပါတီ ဆင်နွဲနေကြတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါနဲ့ သူဟာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ဆက်ပြီးကားမောင်းသွားရတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ပဲသေဆုံးသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာမြန်မာ ပြည်က ပြည်သူကျမ်းမာရေးစနစ် ပြိုကျနေပုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖေါ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ သူလို့ ပြည်စုံပြီး ပေါက်ရောက်တဲ့ လူတယောက်တောင် အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံရတဲ့အတွက် အောက်ခြေဆင်းရဲ သားပြည်သူတွေဟာ နေစဉ် နှလုံးရောဂါနဲ့ ဘယ်လောက်သေနေကြမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားဝံအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နှလုံးရောဂါရှိသူဖြစ်တယ်။ ဒါဟာဒုတိယအကြိမ် နှလုံးရောဂါဖေါက်ခြင်း ( Second Attack ) ဖြစ်ပါတယ်။သူသာ တကယ်လို့ အမေရိကန်မှာဆိုရင် သေဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာလူချစ်လူခင်များသူတဦးဖြစ်ပြီး၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သူရဲ ထူးဆန်းတဲ့သေဆုံးမှုကို ၀မ်းနည်းကြောင်း သူမိတ်ဆွေတွေကအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာဖေါ်ပြထားကြပါတယ်။ လူတွေက နှစ်ဆုံးမှာမီးလောင်နှစ်သစ်ကူးမှာအသက်ထွက် ၂၀၁၂ က တော့ အစိုးရအတွက် နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။See More3 hours ago · LikeUnlikeWai Zin copy from U Moe Thi Blog 'We Fight We Win"2 hours ago · LikeUnlike · 1Ma Chaw Su I agree with Wai Zin. I am sure we can learn from the lesson. Now we needagood health care system right away. There are so many Burmese Doctors can make the dream come true in and outside of the country. All we need isagood leader and good management who can run the country by using our natural and human resources wisely and sustainbility. If Thailand can do it why not us !!!33 minutes ago · LikeUnlikeWriteacomment...Album:Dr. Nay Win Maung (1962 - 2012) ·2of 34Shared with:PublicDownloadReport This PhotoSponsoredSponsored LikeCommentUnlikeComment Type any name to tag:Type any nameThe Voice WeeklyThe Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ယင်းနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးပါကြောင်း။LikeUnlike · · Share ·9hours ago3 people like this.1 share1 shareWai Linn ဆရာရယ်.ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲဗျာ...နှမြောတယ်7 hours ago · LikeUnlikeKhant May May ဆရာ......56 minutes ago · LikeUnlikeMa Chaw Su Sayar , I am sure you are now rest in peace.33 minutes ago · LikeUnlikeWriteacomment...Album:Dr. Nay Win Maung (1962 - 2012) ·3of 34Shared with:PublicDownloadReport This PhotoSponsoredSponsored LikeCommentUnlikeComment Type any name to tag:Type any nameThe Voice WeeklyThe Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ယင်းနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးပါကြောင်း။LikeUnlike · · Share ·9hours ago16 people like this.3 shares3 sharesKhin Kalayah Soe များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။9 hours ago · LikeUnlikeRocker Iris မိသားစုနဲ့ထပ်တူ..၀မ်းနည်းမိပါကြောင်း......8 hours ago · LikeUnlikeSai Tha Aung အကြွေစောလို့ နှမြှောမိပါတယ်။8 hours ago · LikeUnlike · 1Tin Aung Moe ကိုနေဝင်းမောင် ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ။8 hours ago · LikeUnlikePhyolwin Zaw ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ။6 hours ago · LikeUnlikeKa Bew Htoo ဘာဖြစ်လို့ စောစော သဂြိုလ်တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ချက်ချင်း သဂြိုလ်ရတာလဲ။5 hours ago · LikeUnlikeWriteacomment...Album:Dr. Nay Win Maung (1962 - 2012) · 1 of 34Shared with:PublicDownloadReport This PhotoSponsoredSponsored ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ကွယ်လွန် Sunday, January 01, 2012 zarny win9comments ~The Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင် မီးသဂြိုဟ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။(ဆေးရုံမှကားများ နေ့လည် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)လို့ The Voice Weekly ဂျာနယ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်အတွက် အမှတ်တရ Facebook စာမျက်နှာ ဖွင့်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ https://www.facebook.com/NayWinMaung.Dr ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဧရာဝတီက ၂၀၁၁ အတွင်း ထူးခြားထင်ရှားသူများအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြရာမှာ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် အကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။အမှတ်တရ ပြန်လည် ဖြော်ပလိုက်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင်Myanmar Egress ယခင်နအဖ စစ်အစိုးရ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လှုံ့ဆော်သူတဦးဟု ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀န်းအကြား ဝေဖန်ပြောဆို ခံထားရသူတဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် နီးစပ်သူ တချို့အား ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ နိုင်ငံရေးအရ အကြံပေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထွက်ပေါက်တခုဟု ဦးနေဝင်းမောင်က ရေးသားလှုံဆော်ခဲ့ကာ ပြည်သူများအား မဲပေးကြရန် လှုံ့ဆော်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ အီးဂရက်စ်(Myanmar Egress) အဖွဲ့မှ ၎င်း၏ သင်တန်းသားများကို ထောက် ခံမဲပေးရမည့် ပုံစံရေးသားထားသော အင်္ကျီများ ၀တ်ဆင်စေ၍ ရန်ကုန်မြို့၌ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ Living Color မဂ္ဂဇင်းနှင့် The Voice Weekly ဂျာနယ်တို့၏ထုတ်ဝေသူဖြစ်ပြီး အစိုးရအကြိုက် အယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့် ဆောင်းပါးများ ဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသည့် စာဖတ်ပရိသတ်များ၏ ဝေဖန်မှု အခံရဆုံး သူလည်းဖြစ်သည်။ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် တဦးဖြစ်သော်လည်း ပြည်ပ မီဒီယာများ အပေါ် အမြင်ကြည်သူ တဦးမဟုတ်ပေ။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများကိုသာ ဦးစားပေးသင်ကြားပေးလေ့ရှိသည့် အီးဂရက်စ် အဖွဲ့အား တည်ထောင်သူ ၇ ဦးတွင်ဦးနေ၀င်းမောင်လည်း တဦးပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ထိုအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် Programme Dicector တဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး အကြောင်းအရာနှင့် စီးပွားရေးအကြောင်းအရာ များကိုအဓိက သင်ကြားနေသူလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ အီးဂရက်စ် အဖွဲ့သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ အရာရှိတချို့နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပါတီဝင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများပေးလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တချို့နှင့် အစိုးရတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အီးဂရက်စ် အဖွဲ့မှ ဦးနေ၀င်းမောင်၊ ဦးတင်မောင်သန်း၊ ဦးကျော်ရင်လှိုင် တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဦးဟန်ညောင်ဝေ၊ အစိုးရ ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဦးနေ၀င်းမောင်သည် စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦး၏ သားဖြစ်ပြီး စစ်တပ်အသိုင်းအ၀န်းနှင့်နီးစပ်သူဟု လူသိများသည်။ ၎င်း သည် စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား ထောက်ခံသူတဦးလည်း ဖြစ် သည်။ ဦးသန်းရွှေအား ထောက်ခံခဲ့သော်လည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဝေ ဖန်မှု လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ သင်တန်းသားများကို ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဗဟုအဖွဲ့သို့ ပို့ဆောင်၍ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စသည့် အကြောင်းအရာများကို သင်ယူစေခဲ့သည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၊ ဘန်ကောက်မြို့များသို့ မကြာခဏလာရောက်၍ နိုင်ငံရေးအယူအဆများကို ဟောပြောလေ့ ရှိသည်။~ Posted in: obituary,နာရေး Newer Post Older Post Home9comments: Anonymous says: January 1, 2012 1:22 PM Reply First, of, Irrawaddy's description of Nay Win Maung is distorted. It is not based on facts but conjectures. There is no concrete evidence that he directly supports General Than Shwe. In fact, if you read his articles, he does not like the status quo. Asaregular reader of the Irrawaddy, I am quite disappointed by how the Irrawaddy has been less than neutral when it comes to Nay Win Maung and the Voice. Anonymous says: January 1, 2012 2:03 PM Reply it isatragic death at suchayoung age. I think his family should sue the attending doctors through " the Voice Journal" KoTOE says: January 1, 2012 2:30 PM Reply ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ...ပညာတတ်တစ်ဦးနှမြောစရာ.....ဒါပေမဲ့ဒေ၀ဒတ်နဲ့ ပေါင်းဒေ၀ဒတ်ကိုထောက်ခံနေမှတော့.....အသက်တိုပြီပေါ့။ ၀မ်းနည်းမိပါသည် says: January 1, 2012 4:07 PM Reply လူတစ်ယောက်ဆုံးသွားတာ ၀မ်းနည်းစရာအဖြစ် အပျက်ပါပဲ။ ဘယ်သူ့ကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတာက လူတိုင်းရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပိုင်ခွင့်ပါ။ သူ့စာတွေ အားလုံးနီးပါးဖတ်ဖူးတယ်။ (သီပေါဘုရင် နောက်ဆုံးနေ့တွေအကြောင်း အပါအ၀င်ပါ။) သဘောတူတာတွေလည်း ရှိတယ်။ သဘော မတူနိုင်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုတည်း တစ်ဖွဲ့တည်း ဘာလုပ်လုပ်ထောက်ခံနေတဲ့ လူလို့တော့ လုံးဝ မမြင်ဘူး။ ဆောင်းပါးတိုင်းမှာ ဦးဏှောက်မုန်တိုင်း ဆင်စရာတွေ အများကြီး ပါခဲ့တာကိုတော့ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။ MHK says: January 1, 2012 4:33 PM Reply This is the new I believe nobody expected. Whether or not we agree with him, he made his times remarkably in Myanmar Political society when the main political group could do none of progress/offered no solutions to unlock the long time political dead lock. A very rare personality in Myanmar political society who dare to say what he believe/think regardless of critics/accusations and influence much the younger generation. We must describe his death asalose for Myanmar political society. waiyan says: January 1, 2012 4:53 PM Reply ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် သည်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်တုန်းကမှမကောင်းမပြောခဲ့ပါ သူ၏အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧရာတီမှရေးသားချက်များ မှားယွင်းနေပါသည် အများပြည်သူယုံကြည်ရသောမီဒီယာဖြစ်စေရန် သူ၏ ဘိုင်အို ကို ပြန်လည်လေ့လာဖေါ်ပြပေးသင့်ပါသည်။ Anonymous says: January 1, 2012 7:36 PM Reply ဧရာဝတီ Blogger ခင်ဗျာ။ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကွယ်လွန်တာပဲသိရတယ်။ ဘယ်အကြောင်းကြောင်း ကွယ်လွန်တာလဲ။ မျိုးဆက် says: January 1, 2012 8:35 PM Reply ကြိုပြောပါရစေ။ ကျွန်တော် ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ဘက်တော်သားမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကြိမ်ပဲ မြင်ဖူးပြီး တစ်ကြိမ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အမြင်ကို နားထောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် The Voice ကိုတော့ အထူးတလည်စောင့်ဖတ်ပါတယ်။ အထက်ကွန်မင့်တွေမှာ ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဧရာဝတီက ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်အပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေက မျှတမှုမရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ထောက်ခံသူအဖြစ်သာ ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ အဲလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရမ်းအားကိုးလွန်းသူထဲမှာ သူမပါဘူး။ သူဖြစ်စေချင်တာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ရှဥ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာပါ။ ရနိုင်သမျှ အခွင့်ရေးယူပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကို ဆန္ဒမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဟာ မှားတယ်လို့မမြင်ပါဘူး။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ပါ။ သူဒီလမ်းကြောင်းကို lobby လုပ်ခဲ့သူပါ။ နောက်သူ့မီဒီယာဟာလည်းလေးစားထိုက်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈၊၂၀၁၀ ကာလအတွင်းမှာ တိုင်းပြည်အတွက်သူလည်းစေတနာမှန်နဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး သူယုံကြည်တာကိုချပြခဲ့တာလို့အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ဘ၀ဆက်တိုင်း တိုင်းပြည်နဲ့လူမျုိုးကို အခုထက်ကာလတာရှည်နေပြီး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ။ ပညာရပ်တွေဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ Anonymous says: January 2, 2012 12:50 AM Reply မျိုးဆက် ရဲ့ comment ကိုထောက်ခံပါတယ်။ပညာတတ်ဆရာဝန်တဦး၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအထူးပြု (Yale University, USA) fellow တဦးဟာ မြန်မာပြည်သားတွေ အတွက်သားကောင်းရတနာပါ။ ဒီလိုလူမျိုး ရုတ်တရက် နှလုံးသွေးကြောပိတ်နှလုံးရပ် သေဆုံးရတာ မြန်မာပြည်နောင်ရေးအတွက် ဆုံးရှုံးမှု တရပ်ပါ။ ဧရာဝတီရေ blog ဆိုပြီး အဆောတလျင် မရေးနဲ့နော်။ သတင်းမှန်၊ biography မှန်ဖို့လိုမယ်။ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့ကတော့ကြိုက်ချင်မှာကြိုက်မယ်။ (ဘာကိုဆိုလိုဆယ်ဆိုတာဧရာဝတီသိမှာပါ) ဒါပေမဲ့ အမှန်ကိုသာ ကျင့်ဝတ်စောင့်သိစွာနဲ့ရေးပါ။ PostaComment Ko Thaung ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်အတွက် အမှတ်တရ Facebook စာမျက်နှာ ဖွင့်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ https://www.facebook.com/NayWinMaung.Dr ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ကွယ်လွန် ~ The Irrawaddy's Blog www.irrawaddyblog.comယခင်နအဖ စစ်အစိုးရ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လှုံ့ဆော်သူတဦးဟု ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀န်းအကြား ဝေဖန်ပြောဆို ခံထားရသူတဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် နီးစပ်သူ တချို့အား ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ နိုင်ငံရေးအရ အကြံပေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း သတင်းမျာ...LikeUnlike · · Share ·6hours ago · Aung Min လူတွေက သေသွားသူကို အကောင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့ ရှေးစကားကို အဆွဲပြုပြီး သေဆုံးသွားသူတွေကို အကောင်းကြီးဘဲ ရေးနေကြတာ ဖတ်နေရတော့ လူ့တန်ဖိုးဆိုတာ ဘာကို သတ်မှတ်တာလဲလိုတောင် ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ နေဝင်းမောင်ဟာ သူမသေခင်က ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာ ဝိဝါဒ ကွဲပြားစေမဲ...့ အစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်တွေ ရိုက်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ သူလူငယ်တွေကြားမှာ အဓိကရိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တရပ်က ( မင်းတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို မထောက်ခံဘဲ နိူင်ငံရေးလုပ်လို့ မရဘူးလား) ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအကျိုးဆက်ဟာ ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှု့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုသဘောထားကွဲလွဲမှု့ရဲ့ ဆိုးကြိုးတွေကို ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ တမြေမြေခံစားနေရတယ်။ ဒါကြောင် နေဝင်းမောင်လို လူမျိုးသေဆုံးမှု့ဟာ အရန်းနောက်ကျလွန်းတယ်လို့ ပြောပါရစေ။See More5 hours ago · LikeUnlike ·5Ma May အရမ်းနဲ့ ထောက်ခံတယ်ဗျာ5 hours ago · LikeUnlike Kyaw Than you are right ko aung min,4 hours ago · LikeUnlikeMyape Rit ရုတ်တရက် အသုဘ ချလိုက်တာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်-2 minutes ago · Like Writeacomment... LikeCommentUnlikeCommentTag PhotoClick on the photo to start tagging. Done Tagging Type any name to tag:Type any nameKhin Maung NyoLikeUnlike · · Share · 8 hours agoAung Kyaw Thu likes this.Muaaz Mapara May you rest in peace...6 hours ago · LikeUnlikeWriteacomment...Album:Dr Nay Win Maung · 1 of 50Shared with:PublicTag This PhotoDone TaggingAdd LocationEdit LocationDownloadReport This PhotoSponsoredSponsored3 shares3 sharesKyi Kyi Soe ကိုခင်မောင်ညို ရောက်တယ်ကိုး.. ကျမ လာဖို့စဉ်းစားသေးတယ်.. လူတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပါလေ.. ဆိုပြီး မလာခဲ့မိဘူး..။ သူ့ကိုဒီလိုတွေ့ရရင် ကျမ သိတ်ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်မထင်..။ အသက် ၅၀ ဆိုတာ အလွန်နေပျော် သေးတဲ့ အသက်ပါဘဲနော်။8 hours ago · LikeUnlike · 3Win Latt ဆရာ နေ၀င်းမောင် ဆုံးတာကို ဘာတွေများ like လုပ် နေတာလဲ နားမလည် ဘူး။ fb သုံးတဲ့သူတွေ ဘာမှန်း မသိ like လုပ်ဖို့ရယ်၊ ဘာမှန်း မသိ စွတ် ဝေဖန် ဖို့ပဲ သိကြသလား မသိပါဘူး။8 hours ago · LikeUnlike · 2Hla Hla Win There is no other function than "like" ... I guess they just want to acknowledge it... not necessarily liking the incident or the post....I guess.....8 hours ago · LikeUnlike · 13Shwe Yinn Mar Oo I think they LIKE the action of uploading funeral photos which helps those who couldn't go there see his final moments. I like it too.7 hours ago · LikeUnlike · 9John Han Yeah. me2.7 hours ago · LikeUnlikeMa Nila OH! So SAD ...Saya! I don]t know about this info. I am shock! PEACE THE BODY!7 hours ago · LikeUnlikeHan Nway Saw ဒေါ်စု နဲ့ မင်းကိုနိုင်တို့၈၈ကျောင်းသားများဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆီလျော်တော့ဘူး၊ ဒေါ်စု အချုပ်ခံရစဉ် တတိယလိုင်းဆိုပြီး အုပ်စိုးသူဘက် ပင်းခဲ့သူတယောက် သွားရှာပြီ၊ အရှိန်အဝါ စေတနာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ယှဉ်မရလို့ မှေးမှိန်စပြုချိန်မှာ ဆုံးသွားတာ စိတ်မကောင်းပါ၊ နောက်ကွယ်ကနေ NLD အပဲ့အစင် များကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ခွဲထွက်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပံ့ပိုးခဲ့တာတာ ပြန်သတိရမိတယ်။6 hours ago · LikeUnlikeAquarius Man ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ စေတနာကောင်းထားခဲ့တယ်ဆိုတာကို လုံးဝသံသယမရှိပါ ။ ဒီနေ့သူ့ဈာပနအခမ်းအနားမှာ တက်ရောက်သူအားလုံး သူနဲ့အမြင်တူသူ မတူသူတွေရှိသော်လည်း အားလုံးက သူ့အပေါ်လေးစားမှုကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ဦးရွှေမန်း၊ ဦးအောင်မင်း၊ဦးစိုးသိန်း စတဲ့ ပုဂိုလ်များအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ ၀မ်းနည်းကြောင်း ပန်းခြင်းများပေးပို့ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့သမိုင်း သူရေးထားတာ အထင်အရှားပါပဲ ။ လူသိများခြင်းမရှိဘဲ နောက်ကွယ်ကနေ တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိတ်စတွေ အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ် ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာ အခွင့်အရေးသမားတစ်ဦး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ။5 hours ago · LikeUnlike · 8Tint Lwin နောက်ဆုံးတော့..မီးခိုးငွေလေးလိုပါလား!about an hour ago · Like အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သတိလစ်မေ့မျောနေ Browse › Home › မြန်မာ့သတင်း » အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သတိလစ်မေ့မျောနေ ယခု ထက်တိုင် နိုင်ငံ တော် အာဏာ ကို ချုပ် ကိုင် ထား ဆဲ လို့ယူဆရတဲ့ မြန်မာ့ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ ဟာ ပြီး ခဲ့ တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ ညနေ က မြန်မာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ခု ကို မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် အပါအ၀င် မိသားစု နဲ့အတူ ကြည့်ရှုအပြီး မှာ သတိလစ် မေ့ မျော သွား ခဲ့ ပြီး တနင်္လာ နေ့ညနေမှာ သတိ ပြန်လည် လာ က နောက်နေ့တွေ မှာတော့ သတိမရ တစ်ချက် ရတစ် ချက် ဖြစ် နေပြီး အခု ထက်ထိ အိပ်ရာ ထက် လဲ နေဆဲ ရှိကြောင်း သူ့မိသား စု နဲ့နီးစပ် သူ တစ်ဦး က FNG ကို အတည် ပြုပြောကြား ပါတယ်။ ကနဦးက သူဟာ သေဆုံးသွား ခဲ့ ပြီ ဟု သတင်းများ ထွက် ပေါ် ခဲသေး သည် ဟု နေပြည်တော် ရှိ စစ်တပ် အရာ ရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်း က အတည် ပြုပြောကြားသည်။ အသက် ၇၉ နှစ် အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် မြို့က သူ့ မိသား စု နဲ့နီးစပ် တဲ့ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း ရှင် တစ်ဦး က ” တနင်္လာ နေ့ မှာ ကျွန်တော် တို့စကြားတယ်။ အဖိုးကြီး အိပ်ယာထဲ မျော သွား တယ်လို့သမ္မတရော ၊ ကာကွယ် ရေး ဦးစီးချုပ် ရော အိမ်မှာ အသင့် ရှိနေကြရတယ်။ ကိုမာ လို သတိ မလည် တော့ မယ့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေ တယ်။ သူ့ ရဲ့လုပ်ဖော် ကိုင် ဖက် တွေ က စင်္ကာပူ မှာ သွား ပြီး ဆေးကု သစေချင် တယ်။ မိသား စု က သဘောမတူ ဘူး” ဒါနောက် ဆုံး သိရတာ ပဲ ဟု FNG သို့ ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ သည် ပြီး ခဲ့ သည့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ က စစ်အုပ်ချုပ် ရေး ယန္တယား ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေး နှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး ကောင်စီ ကို ဖျက် သိမ်းကာ အများ က သံသယ ရှိသည့် အရပ်သား အုပ်ချုပ် ရေး ကို အသက်ဝင်စေခဲ့ သည်။ ပြီးခဲ့ သည့် ဇူလိုင် လ ဆန်း က ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ ၏ ဇနီး ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် လည်း သည်းထန်စွာ မကျန်းမမာ ဖြစ် ခဲ့ သည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ၎င်း သည် ယခု ထက် တိုင် သူ၏ ကိုယ်ရံတော် တပ် ဖွဲ့ နှင့် အတူ နေထိုင် ပြီး ၎င်း အဖွဲ့မှ ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်မှုး ကျော်ကျော် သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ ခန္တ ကိုယ်ကို ပင် စေ့စပ်စွာ ရှာ ဖွေ ပြီး မှ အိမ်ထဲ ၀င်ခွင့် ပြုသည် ဟု သိရသည်။ မြန်မာ့ ဆိုရှယ် လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း သည် ၂၀၀၀ ပြည့် နှစ် က စင်္ကာပူ ဉ် သွားရောက် ဆေးကုသ ခံယူပြီး ၂၀၀၁ ခု နှစ် တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ခံရ သည်။ တင်ကျော်ကျော်စိုး (FNG) သစ်ထူးလွင် 12/29/2011 06:23:00 AM ShareThis Labels: မြန်မာ့သတင်း ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြောင်းတော့မည် ကျောင်းသား သမဂ္ဂဗုံးခွဲမှု အဓီက တရားခံ ဘယ်သူလဲ? ဦးနေ၀င်းက ဦးအောင်ကြီးကို လွှဲချသွားတယ်-သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ ဦးအောင်ကြီးရဲ တုံ့ ပြန် ချက်ကိုယနေ့အချိန်ထိ မကြားရသေးပါ၊မဖတ်ရသေးပါ-မိတ်ဆွေ သိရှိပါက ချင်းတွင်းဂျာနယ် သို့ ပေးပို့ဖေါ်ပြပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံ ပါတယ် ခင်များ- (မြဖေ) (
) ၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ ကြေးမုံဦးသောင်းတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဖွဲ.စည်ကြောင်း၊ လူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် တပ်မတော်က တာဝန်ယူကြောင်း ကြေငြာချက်များနှင့် အတူ အများပြည်သူတို့အား စီတန်းလမ်းလျှောက်၍ ဆန္ဒပြပွဲများ မပြုကြရန် မေတ္တာရပ်ခံချက်စာတိုကလေးများကို သတင်း စာတိုက်များတွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့လေသည်။ဆန္ဒပြလျှင်အရေးယူမည်ဟု လည်းနောက်ဆက်တွဲ သတိပေးထားခဲ့၏။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းကြောင်း ကြေငြာချက်ကို ဆန့်ကျင်မှုများပေါ်ပေါက် လာလေမည်ကို ဗိုလ်နေ၀င်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးများ ကြောက်ရွံ.ကြသည်မှာ သိသာထင်ရှားသည်။ အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်တွင် ကိုကိုးကျွန်းအကျဉ်းထောင်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ကာ ဒီမိကရေစီ ၀ါဒီများနှင့် ကွန်မြူနစ်ဟု ယူဆသူများအား ဒလကြမ်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သည့် သင်ခမ်းစာ ရှိသဖြင့် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေကာမူ စစ်အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း၊ ကန့်ကွက်စာတမ်းများသည် မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြောက်များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လူငယ်တပ်ဦး နှင့် မဟာမိတ် အဖွဲ.၊ ရခိုင်သံဃတပ်ဦး၊ ရခိုင်သောတုဇနအဖွဲ.ချုပ် စသောအဖွဲ.အများက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စာများ ထုတ်ပြန်ကြသဖြင့် အစိုးရ သစ်၏ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနအဖို့ ပထမလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆန့်ကျင်စာတမ်းများကို လိုက်လံသိမ်းဆည်း နေရသည်။ လက်ဝဲနိုင်ငံရေးပါတီကြီး ဖြစ်သော ဗမာပြည်အလုပ်သမားပါတီက စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ "လူထုဆန္ဒနည်း မပါပဲစစ်တပ် နည်းသက်သက်ဖြင့် အာဏာသိမ်းနည်းကို ယေဘူယျ အားဖြင့် ပါတီက မနှစ်သက်ကြောင်း" ဟုဆန့်ကျင်ကြောင်း လက်မခံကြောင်းနှင့် ကြေငြာ၏။ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ကြေငြာသော အဖွဲ.အစည်းများမှာ ကျောင်းသားအဖွဲ.အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ် တပ်ဦးသစ်၊ ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂတို့က စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခြင်းကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကြေငြာကြသည်။ ကြောငြာချက်နှင့်အညီ စစ်တပ်အစိုးရအား ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကြသဖြင့် တော်လှန်ရေး အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ.ကြရလေသည်။တပြည်လုံးရှိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသည် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အစည်းအဝေးများကို မတ်လဆန်းကပင် ကျင်းပ၍ ဆန္ဒပြကြသဖြင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်များက ကျောင်းဆောင်များ အတွက် စည်းကမ်းသစ် အမိန့်များကို ထုတ်ပြန်သောအခါ လှုပ်ရှားမှုများမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ဂျူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ "စည်းကမ်းသစ်ကို အလိုမရှိ" ဟုကြွေးကြော်သံများကို အော်ဟစ်သော ရန်ကုန်ကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများသို့ လှည့်လည်ဆန္ဒ ပြကြသည်။ဂျူလိုင် ၅ ရက်နေ့တွင်ကမာရွတ် ရဲဌာနာရှေ.တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းဆန္ဒပြကြသည့် ကျောင်းသားများကို ရဲတို့က သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်လူစုခွဲကြသည်။ ကျောင်းသားတဦးဒဏ်ရာ ရရှိသဖြင့် ဆေးရုံသို့ပို့ရသောအခါတွင် လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်လာခဲ့တော့၏။ ဂျူလိုင် ၆ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ် တခုလုံးမှ တံခါးများကိုသော့ခတ်ပိတ်ဆို့ ပြီး "ဒီမီုကရေစီ ခံတပ်ကြီး" ဟုဆုင်းဘုတ်များ တင်ကာ ဒီမီုကရေစီ တရားပွဲများကို အသံချဲ.စက်နှင့် ဟောပြောကြသည်။မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော ကျောင်းသားများသည် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးကို အမျိုးမျိုး ဟောပြောနေကြရာ "တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင် ဗိုလ်မှုးကြီးများသည် ၃ ယောက်ပေါင်း ၇ တန်းသာအောင်သူများဖြစ်ကြသည်" စသည်ဖြင့် စိတ်တွင်းရှိသမျှ ဟောပြောကြလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် တက္ကသိုလ် တ၀ိုက်တွင် တာဝန်ချထားသည့် ရဲအဖွဲ.ကို ရုပ်သိမ်းကာ စစ်သားများကို တပ်စွဲထားလေပြီ၊ စစ်ကားတစင်းတွင် အသံဖမ်းစက် တခုတပ်ဆင်ထားသည်။ထိုအသံဖမ်းစက်က ကျောင်းသားတို့က အသံချဲ.စက်မှ ဟောပြောသမျှကို ဗိုလ်နေ၀င်း၏ အိမ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်ပေးရသည်။ ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့တွင်မူ ပြင်းထံစွာဟောပြောသော ကျောင်းသားများ၏ ဟောပြောချက်များကို နားမခံနိုင်သဖြင့် ဒေါသ အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကာ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရန် ဗိုလ်နေ၀င်းက ကြိုးမဲ့ အသံလွှင့် စကားဖြင့် ကိုယ်တိုင် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။တက္ကသိုလ် တ၀ိုက်တပ်စွဲထားသော စစ်တပ်များကို ကွပ်ကဲသူ ဒုတိယဗိုလ်မူးကြီး စိန်လွင်က တပ်သားများအား အဆင့်ဆင့် အမိန့်ပေးသဖြင့် လက်နက်မပါပဲ မိမိတို့ အဆောင်တွင်း ၌ ဆန္ဒပြကြသည့် ကျောင်းသားများကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် အဆောင်နေ ကျောင်းသား အများတို့ကိုပါ တွေ.ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ကြသည်။ စစ်သားတို့သည် ဂျီ သရီး သေနတ် သစ်များကို ပထမစတင် အသုံးပြုကာ လက်တည့်စမ်း သတ်ဖြတ်ကြသည်။ထိုသေနတ်သစ်များမှာ အနောက်ဂျာမဏီမှ ပစ္စည်း ကိရိယာများကို ရန်ကုန်တွင် တပ်ဆင်သည်။ ဂျီ သရီး သေနတ်သစ်များကို အာဏာသိမ်းစဉ်က တပ်အချို.သို့ထုတ်ပေးခဲ့ရာ၌ ခုခံမှု မရှိသဖြင့် အသုံးမပြုခဲ့ရပေ။ ထိုလက်နက်သစ်များကို စမ်းသတ်ရန်လက်ယား နေသူ ဗိုလ်နေ၀င်းအဖို့ အခွင့်အရေး ရရှိသွားတော့သည်။ ကျောင်းသား ၁၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၇ ဦးဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု အစိုးရက ကြေငြာ၏။ သေစာရင်း အမှန်မှာ ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပွဲ ပြီးသောအခါ တကသအဆောက်အဦးကို စစ်တပ်က ၀ိုင်းထားပြန်၏။တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဆောက်အဦးကြီး ဖြစ်သည်သာမက မြန့်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်းတွင်နယ်ချဲ.ဆန့်ကျင်ရေး ခံတပ်ကြီးအဖြစ် လူထုက အမွန်အမြတ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဗိမာန်ကြီး ဖြစ်သည်။၁၉၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ သပိတ်မှ စတင်ကာ နိုးကြားလာသည့် မြန်မာလူထုကို ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များက နယ်ချဲ.ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများ ဆီသို့ ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်က ဖွဲ.စည်းခဲ့သည်။ သမဂ္ဂအဆောက်အဦ ကို မျိုးချစ်မြန်မာ သဌေး ဦးညိုက တည်ဆောက်လှူဒါန်းသည်။အဆောက်အဦးကို ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကျမ္မာရေး ကိစ္စများကို အသုံးပြုရန် ဦးတည်သဖြင့် အင်္ဂလိပ် တက္ကသိုလ် အဏာပိုင်များကပင် အားပေးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများက စကားရည်လုပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အဖို့ အန္ဒိယပြည်နှင့် ခွဲရေး၊ တွဲရေးပြဿနာ ပေါ်လာသောအခါ သမ္မဂ ခန်းမဆောင်မှာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ စကားစစ်ထိုးရာ ဗိမာန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဦးဘဖေ၊ ဒေါက်တာ ဗမော် စသော ခေါင်းဆောင်များသည် တကသ ခန်းမမှ ဟောပြောကြရင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။နောက်ပိုင်းတကသ အသင်းကို ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုနု၊ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုကျော်ငြိမ်း၊ ကို သိန်းဖေနှင့် ကိုရာရှစ်တို့ တက်လာချိန်မှ စတင်ပြီး နယ်ချဲ. တိုက်ပွဲ စစ်မြေပြင်၏ ခံတပ် အဆောက်အဦးကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံမှ အင်္ဂလိပ်တို့အား လက်နှက်နှင့် တိုက်ခိုက်နှင်ထုတ်မှု အထိအရှိန် အဟုန် ပြင်းထံခဲ့သဖြင့် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများ၏ အောင်ဗိမာန်ကြီး အဖြစ် မြန်မာ တမျိုးသားလုံးက ဂုဏ်ယူခဲ့ကြသည်။ဗိုလ်နေ၀င်း တက္ကသိုလ်ရောက်ရှိချိန်တွင် တကသ လှုပ်ရှားမှုများ ကြီးစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုပဲ ကျောခိုင်းနေခဲ့သည်။ "ပြောကြဟောကြတာတွက လေကုန်သည်၊ သူ့အဖို့လည်ပတ်၊ ဘောလုံးကစားရန်ပင် အချိန်မလောက်၊ သူ့လမ်းနှင့်သူ မှန်မှန် ချီတက်လျှက်ရှိခဲ့ပေသည်" ဟုဒေါက်တာမောင်မောင်ရေးသည့် ဗိုလ်နေ၀င်း အတ္ထုပတ္တိ စာအုပ်ကြီးတွင် သူကပြောခဲ့သည်။ဤ တကသ အဆောက်အဦကြီးမှ ကိုနု ကိုအောင်ဆန်းတို့ လူငယ်တစု နိုင်ငံက ကိုးစားသော ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို သူက အမြဲ မနာလိုဖြစ်နေခဲ့သည်။ နယ်ချဲ.တော်လှန်ရေး အရေးတော်ပုံကြီး၌ သူမပါခဲ့သောကြောင့်မကျေ မနပ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် တကသ အဆောက်အဦကြီးကို သူ မကြည့်လို။ထို့ပြင် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က ကျောင်းသားများကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်စဉ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သေဆုံးခြင်း မရှိ၊ အချို.မှာ ဖမ်းဆီး၍ပင် မမိသေးပဲ တကသ အဆောက်အဦ မျက်နှာကြက်တွင် ပုံးအောင်းနေသည်ဟု သတင်းကို ဗိုလ်နေ၀င်း သိရှိသောအခါ တကသ ခေါင်းဆောင်မှန်သမျှကို သတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တကသ အဆောက်အဦကြီးကိုပါ အပြီးအပြတ်ဖျက်ဆီးရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြန်သည်။သမဂ္ဂရုံးကို ဖြိုပြီးနောက် ဗိုလ်နေ၀င်း ဥက္ကဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီက "စည်းကမ်းမဲ့ဘ၀ကို ပြင်ရမည့်တာဝန်သည် မိမိတို့အပေါ်တွင် ကျရောက်နေသဖြင့် တပ်မတော်၏အား တစိတ်တဒေသကို သုံး၍ဖြေရှင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်" ဟုကြေငြာခဲ့၏။ ထိုကြေငြာချက်မှာ စစ်တပ်ကို အံတုကြလျှင် ယခုထက်ကြီးမားသော လက်နက် အင်အားနှင့် ဖြေရှင်းမည်ဟု ရာဇသံပေးသည့် သဘော သက်ဝင်၏။ထိုမျှမကသေး တကသ အဆောက်အဦကို ဖျက်ပြီးနောက် လူထုအား အသံလွှင့် မိန့်ခွန်းပေးရာတွင် သူကသတ်ဖြတ်လိုက်သော ကျောင်းသားငယ်ကလေး များသည် လက်နက်ဟူ၍ အပ်တို တချောင်းမှ မရှိကြသည်ကို သူသိပါလျက်နှင့် လက်နက် ကိုသူပုန်အဖွဲ.ကြီးများကို ရင်ဆိုင်နေသည့် သဖွယ် ပုံကြီးချဲ.၍ "ဓားကို ဓားခြင်း၊ လှံကိုလှံခြင်း ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်" ဟုဒေါသဟုန်း ဒေါသသံနှင့် အသံလွှင့်၍ ပြောခဲ့ပြန်သည်။ဗိုလ်နေ၀င်း နှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီး တစုသည် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က ကျောင်းသားများကို သတ်ဖြတ်မှုကြီးနှင့် နိုင်ငံက အမွန်အမြတ်ထားသည့် တကသ အဆောက်အဦကြီး ကို ဗုံးခွဲ ဖျက်ဆီးမှုကြီး တို့ကို ဒေါသမွှန်သဖြင့် စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းသည် သူတို့၏ စစ်တပ်အဖို့ မတရားကြီးမားသော ရာဇ၀တ်မှုကြီး ဖြစ်နေသည်ကို စဉ်းစားမိကြသည်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ.သော လိပ်ပြာကလေးကို အမြောက် နှင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ ရာဇ၀င်ရိုင်းနေသည်ကို တစိမ့်စိမ့် တွေးတော၍ မြင်တွေ.မိကြသောအခါ တနေ့တွင် လူထုက ဒဏ်ခတ် လေမည်ကို ကြောက်သွေးဖြာလာကြသည်။မတရားမှုကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇ၀တ်မှုကြီးအတွက် တစိမ့်စိမ့် ကြောက်ဒူး တုန်လာကြေသောအခါတွင် တရားခံသည် မိမိ မဟုတ်ပါဟု တဦးကို တဦးက လက်ညှိုးထိုး၍ အပြစ်ဖို့ရင်း မိမိအပြစ် မရှိကြောင်း ထုချေမှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုကြသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနှင့် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မူးချုပ် အောင်ကြီးတို့သည် တဦးကိုတဦး တရာခံဖြစ်လေဟန် ဖော်ကောင်လုပ်ကြသည်။ ဗမာ့ တပ်မတော်ကြီး၏ ထိပ်သီးကြီးများသည် သာမာန် သူခိုး လူဆိုးအဖွဲ. ကလေးမျှပင် ညီညွတ်မှု မရှိ၊ အမှားကို ၀န်ခံရန် သတ္တိတစက်မှ မရှိသူရဲဘောကြောင်သူများ ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်လာတော့သည်။ထိုစဉ်က ဒုတိယကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးက "တကယ် အမိန့်ပေးတဲ့စာယူလာပြီး မရမ်းကုန်းကို ပေးလာသူ ဗိုလ်သန်းစိန် ဖြစ်ပါတယ်။ သမဂ္ဂဖြိုဖို့ ဒိုင်းနမိုက်တွေ ဂျီအီးဖိုး အင်ဂျင်နီယာ တပ်ခွဲကိုမှာယူ၊ အဲဒီမှာ မလုံလောက်လို့ စီအဒီ ပင်မစစ် ပစ္စည်းသိုလှောင် ရေးသွားယူခိုင်းသူဟာ ဗိုလ်ကျော်စီုးပါ။ စီအိုဒီ တပ်မှူး ဗိုလ်ဝင်းကို လိုက်ရှာပြီး၊ အင်းတိုင်ကို သွားရောက်ယူရတာပါ။ ခွဲဖို့ အမိန့်ပေးသူတွေဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ကျော်စိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် ဒိုင်းနမိုက်တွေ ဆင်ရတဲ့ တပ်က အင်ဂျင်နီယာ တပ် ဗိုလ်မှူးထွန်းရီ ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဒိုင်းနမိုက်တွေ ဆင်ရတာဟာ နံနက်လင်းအားကြီးမှ ဖြစ်ပါတယ်၊ လက်မှတ်ထိုးမည့် အရာရှိကြီးကြီးမားမား မရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတုန်း လမ်းလျှောက်ရင်း ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူက၀င်ပြီး ခွဲတဲ့အမိန့် လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့၊ ဗိုလ်ထွန်းရီ က ပြောလို့ ၊ သူကလက်မှတ်ဝင်ထိုးပြီးဒိုင်းနမိုက် ခွဲတာဖြစ်ပါတယ် တရားခံ ဖြစ်ရှာတဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီး ဆိုသူဟာ ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အိမ်လိုက်အသွား ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဦးကာ ကို ဗိုလ်လှဟန်က သမဂ္ဂဖြိုဖို့ အမိန့်ရတယ်လို့ ပြောတာ ထပ်ကြားရတော့ အရဲစွန့်ပြီး၊ ဗိုလ်ကျော်စိုး ရှိရာ အသံလွှင့်ရုံကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီး၊အဲ့ဒီကိစ္စကိုရပ်ထားပေးပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို ကျွန်တော်ပြောပါမယ် ဆိုပြီး၊ ဟိုရောက်တော့လဲ ဘာမှ မပြောဘဲ မလိမ့်တပတ်နည်းနဲ့ ထားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် " ဟုသူ၏ စာတမ်းတွင် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ရေးသားကာ ဖြေရှင်းသည်။ဗိုလ်နေ၀င်းက တဖန် အကြီမ်ကြိမ်ဖြေရှင်းသည်။ သူ၏ နောက်ဆုံးနေ့ လူထုကလက်မခံတော့ သဖြင့် မဆလ ဥက္ကဌကြီး ရာထူးမှ ထွက်ပေးရသောနေ့တွင် ပင် လူစုလူဝေးရှေ.မှာ ကျွန်တော်စကားပြောတာ ယခုအကြိမ်ဟာ နောက်ဆုံး အကြိမ်ဖြစ်နိုင်တာမို့ ကျောင်းသားများက ကျွန်တော်နှင့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီတဖွဲ.လုံးအပေါ် အထင်လွဲနေသည့် အဖြစ်အပျက်တခု တင်ပြပါရစေ ဟု ပါတီညီလာခံမှ ထပ်မံ ရှင်းပြန်၏။ တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဂျု လိုင် ၈ ရက်နေ့နံနက်တွင် ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ကို အများသိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ဂျူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ညနေ ကျွန်တော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အပိုင်းကို ဖေါ်ပြမှ ပြည့်စုံမည် ဖြစ်၍ ဖေါ်ပြပါမည်။ထိုနေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် သေနတ်ပစ်သံ ကြား၍ ကျွန်တော်က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဗိုလ်ကျော်စိုးကို အခြေအနေ မေးရာ ဆရာကြီး ဦးကာတို့မိသားစုအား ဘေးကင်းသည့် နေရာသို့ ပိုထားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ ဆူပူသူ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းမိပြီလားဟု မေးရာ မမိသေးကြောင်း သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးတွင်း အချို.ရှိကြောင်း ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်က ရဲများ တပ်မတော်သားများ နောက်ထပ် အနာတရ မရှိရအောင် အောက်ပါအတိုင်း ညွန်ကြားပါသည်။(က) သမဂ္ဂ အဆောက်အဦး အတွင်းရှိ သူများကို အဆောက်အဦးတွင်းမှ ထွက်ကာ အဖမ်းခံရန် အသံချဲ.စက်ဖြင့် ပြောရန်၊ ထွက် မလာပါက လက်နက်ကြီးများ သုံးမည်ဆိုသည့် အချက်ထဲ့ပြောရန်(ခ)အသာတကြည် ထွက်၍ အဖမ်းမခံပါ ရီကွိုင် လက် ဂန်းဖြင့် ပစ်ဖမ်းရန် လိုအပ်ပါက ရီကွိုင်လက် ဂန်းသုံးရန် ၊ အထက်ပါအချက်တို့ကို မမှောင်ခင် ပြီးအောင် ဆောင် ရွက်ရန်။ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာ ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးရန် အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် ကျွန်တော် နှင့် တကွ တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် အချို.တို့ မပါခဲ့ပါ။ ဂျူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့နံက်တွက် ဗုံးကြီးကြီး တလုံး ပေါက်ကွဲသကဲ့သို့ အလွန်ပြင်းထန်သော မြည်ဟီးသံကြီး ကြားရသဖြင့် စုံစမ်းတော့မှ သမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ကို (ဒိုင်းနမိုင်း) တို့နှင့် ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း ကျွန်တော်သိရပါသည်။အခြားတော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် အတော်များများ လည်း ထိုပေါက်ကွဲသံကြားပြီးမှ သိကြရပါသည်။သို့သော် အသံလွှင့်ရုံတွင် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အချို.တို့ဖြင့် ဖွဲ.စည်းထားသော လုံခြုံရေးကောင်စီအားလုံးနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန် ယူရသော လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုး ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး လှဟန် ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့် ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဘနီ၊ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် ရမင်းကြီး ဦးဘအေးတို့ ရောက်နေကြပါသည်။ထို ဂျူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ကို ဖြိုလိုက်ကြောင်း သိပြီး နောက် ဗိုလ်ကျော်စိုး ကို ခေါ်၍မေးရာ ၇ ရက်နေ့ညနေက ကျွန်တော်က သမဂ္ဂအတွင်း ၀င်ရောက်နေသည့်ဆူပူသူ ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးရာတွင် လိုအပ်လျှင် ရီကွိုင်းလက်ဂန်းကိုသုံနိုင်သည်ဆိုသည့် အချက်ကို သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖျက်ခိုင်းသည် ယူဆသဖြင့် ဖျက်လိုက်သည် ဟုဖြေပါသည်။ဒီလိုဆိုရင်လည်း ဓား ဓားချင်း ၊ လှံလှံ ချင်းဆိုသည့် စကားလုံးများ ပါသည့် ကြေငြာချက်ကို အသံလွှင့်လိုက်ပါသည်။နောက်သုံးလေး လကြာပြီးနောက် ကျွန်တော် အရက်မူးမူးနှင့် သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို ဖျက်ဖို့ အမိန့်ပေးသည်ဟု နိုင်ငံခြားသတင်းစာ ဆရာတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ပြောဆိုနေသည်ကို ကြားရ၍ ဗိုလ်ကျော်စိုးကို ကျွန်တော် အရက်မူးပြီး ဖျက်ဖို့ အမိန့်ပေးတယ် လို့ ကျွန်တော် တယောက်ထဲကို တရားခံ လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြခိုင်းပါသည်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဗိုလ်ကျော်စိုးက အဖြစ်အပျက် အမှန်ကို ပြောပြပါတော့သည်။ အရင်က တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်ခါစတွင် စိတ်ဝမ်းကွဲကြတာတွေ မပေါ်အောင်လို့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ ဖြေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဖြစ်အပျက် အမှန်မှာ ထို ၇ ရက်နေ့က အသံလွှင့် ရုံရှိလူစုထဲမှ တဦးတယောက်က ဖျက်ပစ်လျှင် ကောင်းမည်ဟု ပြောရာမှ ဖျက်သင့် မဖျက်သင့်ကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ် ကို အသိပေးပြီး ဗိုလ်ချုပ်သဘောတူ လျှင် ဖျက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ဗိုလ်အောင်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်ထံ သူသွားပြီး တင်ပြမည်၊ သဘောတူ မတူ အဖြေကို သူယူခဲ့မည်ပြောပြီး ကိုလှဟန်ကို ခေါ်၍ကားနှင့် ထွက်သွားပါသည်။ထို့နောက် ဗိုလ်အောင်ကြီး အသံလွှင့်ရုံသို့ ပြန်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်က သဘောတူလိုက်ပြီဟု ပြောသဖြင့် အသံလွင့် ရုံရှိလူသိုက်တို့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ကို ဖျက်ဖို့ ပစ္စည်းများ စုပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်ပါသည်။ထိုအဖြေကို ရပြီးနောက် ဗိုလ်အောင်ကြီးမပါပဲ ကျန်တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင်များကို ခေါ်၍ ဗိုလ်အောင်ကြီး ကျွန်တော်ကို မတင်ပြပဲနှင့် ကျွန်တော်၏ သဘောကို မမေးပဲနှင့် အသံလွှင့်ရုံရှိ လူသိုက်ကို ကျွန်တော်သဘောတူ လိုက်သည်ဟုပြောသည့် အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။............ဟု ဗိုလ်နေ၀င်းက တိုင်းပြည်သို့ ရှင်းပြသည်။ဗိုလ်နေ၀င်း၏ နောက်ဆုံးနေ့ မျက်ဖြေ လင်္ကာ စာတန်းကြီးမှာ ကာရန်မပါ စာသားမချောပါ။ အဖြစ်မှန်ကို ကိုယ်တွေ.မျက်မြင် သိရှိခဲ့သော သတင်းထောက်များ အဖို့ စာရှည်ကြီးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဖတ်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်း ၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးနှင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် စစ်ဗိုလ်ကြီးများသည် လမ်းကြိုလမ်းကြားမှ ခါးပိုက်နှိုက် အဖွဲ.၏ အဆင့်ပင်မရှိ။ အရေးကြုံက မိမိကိုယ် လွတ်ရုံးကာ လွယ်ကူစွာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ကို တရားခံဟု လက်ညှိုးထိုး၍ ဖေါ်ကောင် လုပ်ကြသည်ကို သိသာထင်ရှားစွာ မြင်တွေ.ကြရပေသည်။ဂျူလိုင် ၇ ရက်သွေးချောင်းဆီး လူသတ်ပွဲကြီးနှင့် ပတ်သက်၍(က) ဗိုလ်နေ၀င်းက စောစောက မသိ သေနတ်သံကြားမှ သိရသည်ဟု ဖြေရှင်းခြင်းသည် လိမ်ညာသော မုသားဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတို့ ဟောပြောချက်ကို သူ့ထံသို့ ကြိုးမဲ့ အသံလွှင့်ခွက်နှင့် လွှင့်ကြားပေးသောကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ အသံကို စိတ်ဆိုးကာ သတ်ဖြတ်မိန့်ထုတ်သည်မှာ ဗိုလ်နေ၀င်း ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။(ခ) ထိုစဉ်က တပ်ဦးမှ ပစ်မိန့်ပေးရသူ ဗိုလ်စိန်လွင်က မိမိသည် ဗိုလ်နေ၀င်း၏ အမိန့်အရ ပစ်မိန့်ပေးခဲ့ပါသည်ဟု မဆလ ပါတီပျက်သောအခါတွင် ဖြေရှင်းဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။(ဂ) ကျောင်းသားများ လက်ချက်နှင့် ရဲ ၇ ဦး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည် ဟု ဗိုလ်နေ၀င်းက ပြောသည်မှာ လည်း လိမ်ညာသော မုသားဖြစ်သည်။ အဆောင်ဝင်း တံခါး မှန်သမျှကို ကျောင်းသားများက ပိတ်ထားခိုက် ပြင်ပ ရှိ စစ်တပ်က ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ချိန်တွင် တက္ကသိုလ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရဲတယောက်မှမရှိ၊ ကျောင်းသားတို့က ရဲတို့အား ရန်ပြုရန် မဖြစ်နိုင်(ဃ) တကသ အဆောက်အဦး မျက်နှာကြက်တွင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို သတ်ဖြတ်ရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် အဆောက်အဦးကြီးကို ဖျက်စေ အမိန့်ပေးသူမှာ ဗိုလ်နေ၀င်းဖြစ်သည်။ မဖျက်ရန် ဟန့်တားလေဟန်ပြောသော ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်အောင်ကြီးလည်း တာဝန်ရှိသည်။(င) တကသ ကို ဖျက်ဆီးပြီး နောက်တနေ့ နံနက် ဘာကြောင့် ဖျက်ရသည်ဟု တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ကြေငြာချက်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဘ၀ကို ပြင်ရမည့် တာဝန်သည် မိမိတို့ အပေါ်တွင် ကျရောက်နေသဖြင့် တပ်မတော်၏ အားတစိတ် တဒေသကို သုံး၍ ဖြေရှင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟု သတင်းစာတို့မှ ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါလျှက် တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ က မိမိ မသိပါ၊ မိမိ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါဟု ပြောသည်မှာလည်း မဟုတ်မမှန်သော မုသားဟု ထင်ရှားသည်။(စ) ယခုဖြစ်ပျက်သည့် ကိစ္စသည် ကျောင်းသား ကိစ္စတခုတည်းမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေး အမှောင့် ပရောဂ ဖမ်းစားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရိပ်စားမိပါတယ်" ဟု ဗိုလ်နေ၀င်း၏ သမဂ္ဂဖျက်ရကြောင်း ကိုယ်တိုင် အသံလွှင့်ချက်၌ ကျောင်းသားတို့နောက်မှ ဗကပ တို့ ပါလေဟန် ပြောသည်မှာလည်း လိမ်ညာလီဆယ်ချက်ဖြစ်သည်၊ ထိုအချိန်က ဗိုလ်နေ၀င်းက မြို.ပေါ်ရှိလက်နက်ချ ဗကပ များကို သိမ်းသွင်းကာ တောတွင်းရှိ ဗကပ များ အလင်းဝင်ရန် စကားကမ်းလှမ်းနေချိန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတို့ လှုပ်ရှားမှုသည် ပြင်ပ ပယောမပါသည်ကို သိပါလျှက် သတ်ဖြတ်မှုကြီး နှင့် ဖျက်ဆီးမှုကြီးကို လူထုက လက်ခံအောင် လီဆယ်ပြောဆိုချက်သာ ဖြစ်သည်။(ဆ) ကျောင်းသားများအား သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် "ကျွန်တော်တို့ကို အပြောဘ၀မှာ နစ်မွန်းစေခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ပျက်ကွက်အောင် ရည်စူးပြီး တမင်လုပ်နေကြတယ် ဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ်ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး အနည်းဆုံး ဓားကို ဓားချင်း လှံကို လှံချင်း ဆိုင်ဘို့သာ ရှိပါတော့တယ်" ဟုပြောသည်မှာ ဒေါသသံနှင့် တုံရီနေသည်ကို ကြားရသူ လူထုက သိရှိနားလည်ကြသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းရာထူးမှ ဆင်းပေးရသော ၈၈ ခုနှစ်က စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်သည်။ မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ဖေါက်တာမပါဘူး၊ နောင်ကို ဆူဆူပူပူ လုပ်တဲ့သူတွေတော့ မသက်သာဘူးလို့သာ မှတ်ပေတော့ ဟု ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှာ အသံ တမျိုးတည်း ရှိသည်ကို လူထုက သတိရကြသည်။(ည)ထိုစဉ်က လက်တွေ.သတ်ဖြတ် ရုံမျှမက နှုတ်မှ လည်း စစ်ကြေငြာခဲ့ပါလျှက် နောက်ပိုင်းမှ သူသတ်သည် ငါသတ်သည် သူဖျက်သည် ငါဖျက်သည် ဟု တဦးကို တဦးက လက်ညှိုးထိုး၍ ဖေါ်ကောင်လုပ်ကြစေကာမူ ခေါင်းရှောင်ကြစေကာမူ ဗိုလ်နေ၀င်းသည် အဓိက တရားခံ ဖြစ်သည်ကို လူထုကမေ့မရနိုင်ပေ။ဤအချက်များကို ထောက်ရှု.၍ တပ်မတော်ကြီးကို ဦးစီးကြသော ဗိုလ်နေ၀င်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးများသည် ဘိန်းစားခါးပိုက်နှိက် အဖွဲ.၀င်တို့မျှပင် သတ္တိမရှိ လွန်စွာ သူရဲဘော ကြောင်ကြသည် ကို သိသာထင်ရှားစွာ မြင်သိနိုင်ကြပေသည်။ဗိုလ်နေ၀င်း နှင့် စစ်ဗိုလ်တစုသည် အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ.ကို တိုက်ခဲ့သော ကျောင်းသား နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမျှုများတွင် သူတို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိ သဖြင့် ကျောင်းသားများ၏ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ကဏ္ဍကို သမိုင်းမှ ဖျောက်လိုကြသည်။သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို အယူသီး ဘာသာခြားတဦး အခြားဘာသာ အဆောက်အဦးကို မမြင်လိုကြသကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သမဂ္ဂ၌ ပုန်းနေကြသည်ဟု သတင်းရ သဖြင့် သတ်ဖြတ်ရန် သွေးဆာနေသောကြောင့် ဖျက်ဆီးကြသည်။နိုင်ငံ တည်စမှ စတင်ပြီး တပ်မတော်သည် သူတို့ကဲ့သို့ သူရဲဘောကြောင်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းနှယ် လောဘရမက် လွန်ကဲသူတို့၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်ရသည်မှာ နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာ သာဖြစ်ချေတော့၏။ဗိုလ်နေ၀င်းသည် လူသတ်ပွဲကြီး အပီးတွင် ခေါင်းရှုတ်သဖြင့် အပန်းဖြေဦးမည်ဟုဆိုကာ ဥရောပသို့ ဂျူလိုင် ၉ ရက်နေ့က အပန်းဖြေ ခရီးထွက်သောအခါ ဗိုလ်အောင်ကြီးအား တိုင်းပြည်ကို အပ်၍ မင်းပဲကြည့်လုပ်တော့ကွာ ဟု တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဥရောပသွား ဗိုလ်နေ၀င်းည် အမှန်တကယ် အပန်းဖြေသွားသည်ဖြစ်၏။မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင်းပွဲများ ကျင်းပခြင်းမပြုရ ဟု တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ အာဏာဖြင့် သူကိုယ်တိုင် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ငယ်စဉ်ကပင် လောင်းကစား ၀ါသနာထုံခဲ့သောကြောင့် လောင်းကစားပွဲ မသွားရသဖြင့် ပျင်းရိ ငြီးငွေ.စေသည်။ အပန်းဖြေခရီး ကို အင်္ဂလန်ပြည် လန်ဒန်မြို.သို့သွားကာ မြင်းပြိုင်ပဲ ခွေးပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက် လောင်းကစားခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေခဲ့သည်။ ထိုခရီးပြီး နောက်နှစ်များတွင် တနှစ်လျှင် ငါး ကြီမ်နှုန်းခန့် ဥရောပသို့သွားကာ လောင်းကစားပွဲများ အပန်းဖြေလေ့ရှိခဲ့သည်။ကျောင်းသားများကို သတ်ဖြတ်၍ သမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးပြီး ဥရောပသို့ အပန်းဖြေ မထွက်မှီကလေးတွင် ဗိုလ်နေ၀င်းက ကျောင်းသားများအား မအေ နှမ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲဆိုကာ အမိန့်ပေးခဲ့သေးသည်။ "မအေ x တွေ ၊ ကျောင်းမတက်ကြစေနဲ့ ၊ တက္ကသိုလ်အားလုံး ပိတ်ထား......." ဟု သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်း မစာမနာ အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူ၏ခေတ် တလျှောက်လုံး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပေါ်တိုင်း တက္ကသိုလ်များကို နှစ်ရှည် လများ ပိတ်ရန် အမိန့် ထုတ်လေ့ ရှိရာ သူ၏ တပည့်စစ်အစိုးရများကလည်း ထိုလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးကြသဖြင့် စစ်အစိုးရများ ခေတ်၌ ပေါက်ဖွားသည့် မြန်မာ လူငယ်များ အထက်တန်းပညာ မတတ်ကြပဲ လူညွန့်တုံးကြရရှာလေသည်။Credit / ကိုရဲသူရိန်မင်း ဧရာဝတီ ဘလော့မှ ကူယူ ဖေါ် ပြပါသည်။ မြဖေ Least corrupt place? New Zealand. Worst? Somalia, North Korea By Arthur Brice, CNN December 4, 2011 -- Updated 0429 GMT (1229 HKT) မြန်ိမာက တတိယ ရပါတယ် ဗျို့ (နံပါတ်က ၁၈၀ ပါ) မြဖေ Transparency International says corruption isahidden activity that is difficult to measure. STORY HIGHLIGHTS Study looks at perceived corruption in countriesThe United States ranks No. 24 on the least corrupt end of scaleIndex is based partly on business opinion surveys (CNN) -- New Zealand is perceived as the least corrupt nation on earth, and Somalia and North Korea are seen as the most corrupt,aGerman watchdog organization said inareport released this week. The United States ranked 24th least corrupt ona"corruption perceptions index," the fourth-best in the Western Hemisphere. Canada ranked 10th, the Bahamas is 21st and Chile is 22nd. Overall, the top spots are occupied mostly by European countries, with the exception of New Zealand, Singapore at No.5and Australia, which is tied for eighth with Switzerland. Other nations with top rankings are Denmark, Finland, Sweden, Norway and the Netherlands. In addition to Somalia and North Korea, which are tied for last at No. 182, the bottom of the list includes Myanmar, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Sudan, Iraq, Haiti and Venezuela. The report was prepared by the independent, nonpartisan Transparency International organization, which says it drew its conclusions based "on different assessments and business opinion surveys carried out by independent and reputable institutions." The information used to compile the index includes "questions relating to the bribery of public officials, kickbacks in public procurement, embezzlement of public funds and questions that probe the strength and effectiveness of public-sector and anti-corruption efforts," Transparency International said. Perceptions are used, the organization said, because corruption isahidden activity that is difficult to measure. "Over time," the organization said in its report, "perceptions have proved to beareliable estimate of corruption." The rankings for other Western Hemisphere countries are: Uruguay (25), Puerto Rico (39), Costa Rica (50), Cuba (61), Brazil (73), Colombia, El Salvador and Peru (tied for 80), Panama (86), Argentina and Mexico (tied for 100), Bolivia (118), Ecuador and Guatemala (tied for 120), the Dominican Republic and Honduras (tied for 129), Nicaragua (134), Paraguay (154), Venezuela (172) and Haiti (175). The index usesascale of 0-10 to measure perceived corruption, with zero representing highly corrupt and 10 being very clean. New Zealand, the highest-ranked nation, hasa9.5 score. Somalia and North Korea, the lowest-ranked, have 1.0. The United States scored 7.1, while Canada is 8.7 and Chile is 7.2. Haiti, the lowest-ranked nation in the Western Hemisphere, scored 1.8. Next-worst is Venezuela with 1.9. In Eastern Europe and Central Asia, Turkey is ranked highest at 61 with 4.2 on the scale, and Turkmenistan and Uzbekistan are lowest, tied for 177 witha1.6 index value. In the European Union and Western Europe, Denmark and Finland are best, tied for second witha9.4 index value. Bulgaria is lowest at No. 86 witha3.3 on the corruption scale. In the Middle East and North Africa, Qatar is best at No. 22 anda7.2 index value. Iraq is lowest, ranked No. 175 witha1.8. In Sub-Saharan Africa, Botswana is ranked highest at No. 32 anda6.1 index value. Transparency International, headquartered in Berlin, reports having 90 chapters worldwide. The organization says it works with partners in government, business and civil society to develop and implement effective measures to combat corruption. The complete report, released Thursday, can be seen at www.transparency.org.
Who's Online	We have 21 guests and 1 member online	Oxford Advanced Learner's Dictionary at ... English - Myanmar online dictionary at MyOrdbok မြန်မာမီဒီယာများ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း ဌာနများ President-officeပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနThe Voice Weeklyရန်ကုန်တိုင်းမ်Eleven Media Groupပေါ်ပြူလာရွှေအမြုတေနေရဉ္ဖရာမဇ္ဈိမဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံHot Newsလွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း မြန်မာမီဒီယာများ မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်းဈေးကွက်ဂျာနယ်လောကအလှအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းသံလွင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပေါ်ပြူလာဂျာနယ်Chic မဂ္ဂဇင်းယခုအပတ်စဉ်မဂ္ဂဇင်းအမှန်သတင်းများဂျာနယ်၇ရက်သတင်းဂျာနယ်အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းပီးပဲလ်မဂ္ဂဇင်းအောင်မြင်မဂ္ဂဇင်းသရဖူမဂ္ဂဇင်းပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမန္တလေးအိုင်ကွန်မဂ္ဂဇင်းချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းအထက်မြန်မာပြည်ဂျာနယ်များအလင်းတန်းဂျာနယ်လျပ်တပြက်ဂျာနယ်သတင်းဆယ့်တစ်ဂျာနယ်အပတ်စဉ်အသံဂျာနယ်အသံဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းဌာနများ ဦးထွန်းလွင်(မိုးလေဝသ)TheNewLightofMyanmarကြေးမုံသတင်းစာမြန်မာ့အလင်းမြန်မာ့သတင်းအစုံအလင် Radio ဘီဘီစီဗွီအိုအေလွတ်လပ်သည့် အာရှအသံဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံမိုးမခCNNAl JazeeraBBCVOARFADVB ဆုံဆည်းရာနစ်နေမန်းမိုးသီးဇွန်ဒီမိုဝေယံဒေါင်းမာန်ဟုန်အညာနွေ တမာမြေမျိုးချစ်မြန်မာညိုကြီး ကိုထိုက် ဒီရေ ဧရာဝတီ ►ဘောလုံးပွဲအဖြေတိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုရန် မင်းသား မင်းသမီး ဒါရိုက်တာ မော်ဒယ်လ်များကျော်သူစင်ရော်မောင်မောင်နေတိုးကျော်ကျော်ဗိုမင်းထက်ကျော်ဇင်ရဲတိုက်မိုးယံဇွန်ကောင်းခန့်နန္ဒလှိုင်စမိုင်းတင်မိုးလွင်တင့်တင့်ထွန်းထွန်းအိန္ဒြာဗိုသန္တာလှိုင်ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဖွေးဖွေးနန်းစုကေဆွမ်နန်းစုရတီစိုးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအေးဝတ်ရည်သောင်းသင်ဇာဝင့်ကျော်စန္ဒီမြင့်လွင်ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းခိုင်သင်းကြည်မော်ဖူးမောင်မြလေးထက်မိုးမြင့်ဇင်ဇင်အိမ့်ဖူးငယ်အေပရယ်လ်စောအေးမြတ်သီဟန်New JulietMagnolia CiSnow Silverသီရိရှင်းသန့်ခင်နန်းထိုက်ပိုးလေးချစ်လေးနဒီထွဋ်ုဆွေဆုကဗျာဝင်းထွဋ်ုတာယာပပ၀င်းဆုပန်ထွာမေသက်ခိုင်ပြည့်ဖူးခိုင်ချစ်သုဝေချောရတနာရဝေအောင်မယ်လိုဒီမင်းမော်ကွန်းမီချီကိုမိုးအောင်ရင်ယမင်းသီရိဇော်ချောချစ်ဆုပန်ထွာပုလဲဝင်းမီးမီးသုခမင်းသွေးဂီတရပ်ဝန်း မှ နာမည်ကျော်များဟန်ထွန်းစည်သူလွင်ဆောင်းဦးလှိုင်Cobraစောညီညီကျော်ထွဋ်ုဆွေအနဂ္ဂခန့်ဖြိုးသံသာဝင်းရည်မွန်မေစပါယ်ညိုမေဆွိတင်ဇာမော်သီရိဂျေမောင်မောင်လေးလေးဝါးအေးချမ်းမေကဗျာဘွဲ့မှူးNကိုင်ရာရှင်ဖုန်းထွန်းထွန်း (Examplez)ချန်းချန်းဟဲလေးရေဗက္ကာဝင်းစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ချမ်းအေးဝင်းသျှီရန်ရန်ချမ်းR ဇာနည်မျိုးကြီးချစ်ကောင်းနိင်ဇော်မီးမီးခဲထူးအယ်လင်းCategories A Thin Cho Swe (2) April Kyaw Kyaw (1) April Saw (2) Avril Pontpont (1) Aye Myat Thi Han (2) Aye Myat Thu (9) Aye Wut Yee Thoung (2) Bambino (1) Body Painting (3) Car Show (4) Celebirty's With Tattoos (1) celebirtys' sexy (2) Celebirtys' Snap Shot (24) Celebrity Gossip (1) Celebrity With Bikini (18) Celebrity's Sex Talk (1) Celebritys' Face Book Accounts (1) Celebritys' Hottie (15) Celebritys' Phone Number (1) Celebritys' Sex Tape (6) Celebritys' Tatto (4) Chan Chan (1) Chan Me Me Ko (2) Chit Snow Oo (1) Chit Thel Hnyar (1) Chit Thu Wai (3) Chrissie Wunna (10) Christina (3) Comic (1) Couple (18) Cute (1) Dar Li Linn (2) Ei Phyo Cherry (1) Eindrakyawzin (4) Emily Nandar (1) Gandawin (2) Gossip (3) Hayman Aung Aung (2) Hazel Moe (1) Hnin Htut Swe (1) Hnin Pwint Akare (1) Hnin Wut Yee Thoung (1) Hottie (121) Htet Htet Wint (2) Htet Moe Myat Oo (1) Htet Moe Myint (1) jean (1) Jenny (3) Juu Juu K (4) Khay Me Ko (1) Khin Layy Nwe (1) Khin Myint Zu Hlaing (1) Khin Phome (1) Khine Zaw Thway (1) Khun Sint Naychi (1) L Sai Ze (1) Love Story (4) Marina (1) Maw Phuu Maung (4) May Htut Khaung (1) May Kabyar (1) May Nan Khaung (1) Melody (4) Mi Chi Ko (2) Model (9) Moe Hay Ko (9) Moe Thandar Htet (1) Moe Yu San (5) Moeimagebam.com Hayman Khin (1) Moh Moh Pyae Sone Linn (1) Mone M Thompson (1) Music Show (1) Myanmar Beer (1) Myanmar Classic (5) Myanmar Flim Academy Awards 2009 (2) Myanmar Models (3) Myat Noe Eain (1) Myo Kyawt Myaing (1) Nadi Htut Swe (2) Nadi Wint Naing (5) Nan Khin (1) Nan Su Kay Swan (1) Nan Su's Birthday (4) Nandar Hlaing (2) Nawrat (2) Nay Chi Linn Lei (1) Nay Toe (1) Nge Nge (1) Ni Ni Khin Zaw (1) Nilar Aung Aung (1) Nobel Kyaw Kyaw (1) Notice for can't enter my blog (1) Nude (214) Nwe Nwe Tun (2) Pa Pa Win Khin (1) Pearl Win (5) Photo (626) Phuu Sone (1) Phway Phawy (4) Phway Phway (2) Phyo Thiri Khit (1) Pussy (31) Pwint Nadi Maung (2) Romatic Wedding Fair 2010 (1) Sammie Minaj (1) Sandy Myint Lwin (7) Sexy (1) Sexy Dance (1) Sexy Desktop Wallpaper (1) Shwe Zin (2) Snap Shot (1) Soe Myat Nandar (1) Soe Myat Thu Zar (1) Spy Cam (1) Su Shone Lei (4) Thandar Hlaing (1) Thazin (4) Thinngyan (6) Thinngyan 2011 (2) Thinzar Su Wai (1) Thinzar Wint Kyaw (4) Thiri Shinn Thant (5) Thonedray Oo (1) Tint Tint Tun (3) Video (102) Video Chat (48) Warning For Girls (1) Warso Moe Oo (1) Win Htut Taryar (1) Wine Su Khine Thein (7) World Cup 2010 (1) Wut Mhone Shwe Yee (11) Yadanar Khin (1) Yadanar Mai (1) Yamin Thiri Zaw (1) Yaminn Ko Ko (1) Ye' Lay (1) Ye` Deight (1) Zin Zin Zaw Myint (1) myaperit myape NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ? 15 minutes ago Favorite Reply Delete Remove PostMyape Rit NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို-ရယ်စရာ ပဲဗျ-ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ အဖွဲ့တွေ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ?10 hours ago · LikeUnlike · myaperit myape ချင်းတွင်းဂျာနယ်မိတ်ဆွေများ-ပြန်ရောက်ပါပြီခင်များ-5minutes ago Favorite Reply Deleteံငြိမ်ခံ at Wednesday, June 29, 2011 မြန်မာပြည်သည် ........... တို့ပြည် အစိုးရသည် ........ စစ်တပ် အာဏာသည် .......... သေနတ် တော်လှန်လျှင် .......... ကျည်ဆံ အာခံလျှင် ........... ထောင်ဒဏ် ဝေဖန်လျှင် ............ ပြည်နှင်ဒဏ် အသက်ရှုချင်သေးလျှင် .......... ငြိမ်ခံ Forward mail က ရတဲ့ စာတိုလေး တပိုဒ်ပါ။ ရေးသူနာမည် မဖော်ပြပေးနိုင်တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ဧရာဝတီ ကနေ ထပ်ဆင့်ကုးယူ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ မြ ဖေ Myape Rit hit counter စာပေ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် var counters99_width = 150;var counters99_height = 175;var counters99_vars="id=735738_2&ln=en"; <a href="http://www.superonlinecasino.com/casino-reviews/rushmore-casino">Rushmorecasino</a> <a href="http://www.fxbeing.com/">fx</a> <a href="http://www.casinoschule.com/noblecasino.html">Noble casino</a> <a href="http://www.99counters.com/">online counter</a> <a href="http://www.onlinecasinoextra.com/">ONLINE CASINO</a> သတင်း RSS Feed ဓာတ်ပုံ Nobel Women's Initiative လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိဖို့ ဒေါ်စု ပြော လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဖို့ ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံ | နားဆင်ရန် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ... “အခုဒီဥပဒေတွေဟာ NLD အတွက် ကြီး မားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးပါနေပါ တယ်။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျမအနေနဲ့ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ ဒီလို ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အားတရပ်ကိုတောင် မှ ပြန်လည်မွေးမြူရာရောက်ပါတယ်။ ပြည် သူလူထုကလည်း အဲသလို သဘောထားပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများနဲ့ တသား တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် ပြည်သူသို့ ပြောကြားခ